စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စွဲလမ်းမှု - corticotropin ထုတ်လွှတ်သည့်အချက် (CRF) ၏အာရုံကြောဆိုင်ရာပလပ်စတစ်စနစ် (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
တပ်ဦး Mol neuroscience ။ 2012; 5: 91 ။ 2012 စက်တင်ဘာလ6အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fnmol.2012.00091
ကာရိုလိုင်းနားအယ်လ် Haass-Koffler1,2 နှင့် Selena အီး Bartlett1,3,*
အချက် (CRF) ထုတ် Corticotropin စိတ်ဖိစီးမှုမှ adaptation နှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောအပြုအမူအပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်အချက်မှာ CRF စနစ်၏ Dysregulation ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (ကျင်းပေါင်း) အပါအဝင်စိတ်ရောဂါမမှန်, အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ CRF စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးအားဖြည့်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကျယ်ပြန့်စာပေကျင်းပေါင်းမှ relapse ခပြွီးကြောင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်တစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောမော်လီကျူးယန္တရားများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ CRF ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ CRF စနစ်ကကျင်းပေါင်းတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ ဒါဟာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လည်းဆုတ်ခွာကာလအတွင်း evoked မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် neuroplasticity ၏အလားအလာများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ငါတို့သည်ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက် CRF ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်အဘယ်မှာရှိဦးနှောက်ဒေသများနှင့် circuitries ကိုတင်ပြခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများ၏စူးရှသောအပြုသဘောအားကောင်းအဖြစ်ဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ရာမှဖြစ်ပေါ်သည်ဟုစိတ်ခံစားမှုအပြုအမူတွေ၏ dysregulation ကုသမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေကုထုံးမဟာဗျူဟာအဖြစ် CRF system ကိုပြောင်းလဲပစ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစား။
keywords: neuroplasticity, စွဲလမ်း, corticotropin လွှတ်အချက်စနစ်, အီသနော, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်
မူးယစ်ဆေးစွဲ abstinence နှင့် relapse ၏ကာလအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည်အခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက် function ကိုအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများကျယ်ပြန့် relapse တားဆီးများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန် (ကျင်းပေါင်း) ၏ကုသမှုလွယ်ကူချောမွေ့နိုင်မကုထုံးဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုကကျယ်ပြန့်စာပေစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း (mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း), သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များ (hippocampus), စိတ်ခံစားမှု (amygdala), နှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာ (prefrontal cortex) အုပ်ချုပ်ကြောင်းစနစ်များကိုထိခိုက်စေသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ, စိတ်ခွန်အားနိုးစိတ်ခံစားမှုများနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအပြုအမူတွေ Rezayof et al (အလှည့်အတွက်သြဇာလွှမ်းမိုးသော limbic စနစ်လုပ်ရပ်များမှစွပ်စွဲခဲ့ကြ။ , 2002; ဒါဝိဒ်သည် et al ။ , 2008; မာတင် et al ။ , 2008; Nielsen et al ။ , 2011; Xue et al ။ , 2012) နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတို့အတွက် (Koob တွေ့မြင်, 1992; ပီယပ်နှင့် Kumaresan, 2006; Feltenstein နှင့်ကြည့်ရှု 2008) ။ အထူးသဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ (ပညာရှိများ၏အပြောင်းအလဲတချို့, 1998, 2005) relapse (Koob နှင့် Le Moal များ၏အခွင့်အလမ်းတစ်ခုတိုးလာစေပါတယ်တဲ့အရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး, 1997; Everitt et al ။ , 1999; Koob et al ။ , 2004; Everitt နှင့် Robbins, 2005) ။ ကျင်းပေါင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မူးယစ်ဆေးမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုနှင့်အတူစတင်နှင့်ဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုနှင့်အတူအဆုံးသတ်တဲ့တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများအရေးယူ၏ကွဲပြားခြားနားသောယန္တယားရှိပေမယ့်, ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့အလားတူအာရုံကြောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ပြသလျက်ရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးမဆိုလူတန်းစားမှစွဲလမ်းနေတဲ့သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကမူးယစ်ဆေးဝါးရရှိနိုင်မှုခန့်မှန်းသောမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များသင်ယူ။ သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ် (hippocampus နှင့် amygdala) နဲ့ဆက်စပ်ဒေသများရှိ Neuroadaptations Synaptic ဂီယာလွှမ်းမိုးနေဖြင့်မည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တစ်ခုတည်းဇာတ်လမ်းတွဲအပြီးထိခိုက်နေကြသည်။ F ကိုနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု ollowing, အ compulsive ရှာခြင်းနှင့်မထိန်းချုပ်အသုံးပြုခြင်းကိုထိုကဲ့သို့သော Synaptic strengt ပြောင်းလဲမှုများအဖြစ် Synaptic plasticity အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာတည်မြဲပြောင်းလဲမှဦးဆောင်h.
လူ့လေ့လာမှုများ (Gawin နှင့် Kleber, 1986; Wallace, 1989) နှင့် preclinical မော်ဒယ်များ (Thatcher-Britton နှင့် Koob အတူစမ်းသပ်ချက် 1986; Piazza et al ။ , 1990; Goeders နှင့် Guerin, 1994; Kreibich et al ။ , 2009) relapse ထွက်လာပါတယ်အပါအဝင်မူးယစ်ဆေးစွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်အဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အချက် (CRF) ထုတ် Corticotropin စိတ်ဖိစီးမှု (Britton et al မှ neuroendocrine နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ , 1982; Koob နှင့် Bloom, 1985). ဒါဟာနာတာရှည်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း relapse လွယ်ကူချောမွေ့နှင့်စိုးရိမ်စိတ်တိုးပွားစေဖို့ပြုမူရှိရာ, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေး reinstatement စဉ်အတွင်း activated ခံရဖို့ပြသထားသည် (Shaham et al ။ , 1995; Ambrosio et al ။ , 1997; Koob, 1999) နှင့် Sarnyai et al (ကိုတွေ့မြင်။ , 2001; ဂျော့ခ်ျ et al ။ , 2011) ကျယ်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။
CRF-သွေးဆောင် neuroplastic ပြောင်းလဲမှုများ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NACC) တို့ပါဝင်သည်ကြောင်း mesolimbic ဦးနှောက်ဆားကစ်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးကိုလေ့လာခဲ့ကြ (Ungless et al ။ , 2003; ဝမ် et al ။ , 2007a; Hahn et al ။ , 2009) နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သော amygdala (Fudge နှင့် Emiliano အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများအတွက် 2003; Pollandt et al ။ , 2006; ဖူ et al ။ , 2007; Kash et al ။ , 2008; Francesconi et al ။ , 2009).
မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထောက်ခံအားပေးကျယ်ပြန့်သုတေသနနေသော်လည်း relapse မှဦးဆောင်ကြောင်းမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် Synaptic plasticity အပေါ် CRF ၏တိကျသောပါဝင်မှုအတိအကျမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကို CRF နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-mediated Synaptic plasticity နှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်မကြာသေးမီကသုတေသနပြုဆန်းစစ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ VTA နှင့် CRF အလွန်အမင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ကိုဘယ်မှာ amygdalar အရေးပါဖော်ပြထားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ CRF အဆိုပါ Basal အခွအေနေကနေ Synaptic အစွမ်းသတ္တိကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ရှိမရှိဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ relapse တားဆီးနှင့်ကျင်းပေါင်းကုသမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်စမ်းသပ်ဟော်မုန်းများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာမူးယစ်ဆေးပစ်မှတ်အကဲဖြတ်ဖို့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများရဲ့အပြန်အလှန်အနေဖြင့်ဖြစ်ပေါ်သော neurobiological အပြောင်းအလဲများကိုပေါင်းစည်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန် (ကျင်းပေါင်း) နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု
ကျင်းပေါင်းဆုတ်ခွာကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုများအတွက်ပြင်းထန်သောဆန္ဒဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာနာတာရှည်နှင့် relapsing ခွအေနအေဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာတဏှာဖြစ်စဉ်ကိုစားသုံးမှုနှင့်အချိန်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအလေ့အကျင့်ကိုပြောင်းလဲနောက်ဆက်တွဲနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကန့်သတ်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးတဲ့နောက်ဆက်တွဲ compulsive နှင့်အလေ့အထဖွဲ့စည်းစားသုံးမှုမှကနဦးထကြွလွယ်သောစားသုံးမှုကနေတိုးတက်မှုစေပါတယ်။ preclinical စွဲသုတေသနအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုများတစ်ခုမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထိန်းချုပ်၏ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် relaps ဖို့ဓာတ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောလမ်းကြောင်း elucidate မှခဲ့သည်အီး (Koob နှင့် Le Moal, 1997). As ကဖော်ပြထား ပြိုင်ဘက် Process ကိုမော်ဒယ်, စွဲလမ်းတ္ထုများရဲ့ထပ်တလဲလဲသုံးစွဲမှုပြင်းထန်သောအပျော်အပါးပြည်နယ်လျော့ကျလာခြင်းဖြင့်အောက်ပါမနှစ်မြို့ဖွယ်ပြည်နယ်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ဆုလာဘ်ဆားကစ်ပွောငျးလဲ။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု၏ပြတ်တောက်ပြီးနောက်အစားထိုးတုံ့ပြန်မှုမူးယစ်ဆေး-ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေအဓိကသက်ရောက်မှုဆန့်ကျင်ကြောင်းဖွံ့ဖြိုး။ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ၏လျော့ချရေးထို့ကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ကိုယ်စားပြုလိမ့်မယ်။ ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေ၏မနှစ်မြို့ဖွယ်ပြည်နယ်များ၏လျှော့ချရေးဆက်လက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်အဓိက drive ကိုဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ၏ရိုးရှင်းသောအမြင်တွင် dopamine သီအိုရီ (ပညာရှိ, 1978, 2008; Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 1998; Everitt နှင့် Robbins, 2005; ဒိုင်ယာနာ, 2011ဆုတ်ခွာကာလကနေရရှိလာတဲ့အတွက်အနုတ်လက္ခဏာအစိတ်အပိုင်း dopamine function ကို (Tomkins နှင့်ရောင်းအား၏လျှော့ချရေးခြင်းဖြင့်မှတ်သားနေစဉ်), Bing-မူးယစ်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောစူးရှသောပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်စဉ်ကို, အ dopaminergic စနစ်၏ activation ကိုကိုယ်စားပြုတယ်, 2001) ။ ၏နိဒါန်း အလုပ်လုပ်တဲ့အဆိပ်အတောက် (Weiss နှင့် Koob, 2001နောက်ထပ်တိုးချဲ့), သောကဖိစီးမှု neurotransmitter, CRF ၏စုဆောင်းမှုစွမ်းအားဖြင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဆုတ်ခွာပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်, dopamine သီအိုရီ အဲဒါကိုစွဲသက်ဆိုင်အဖြစ်။
Corticotropin အချက် (CRF) စနစ်ဖြန့်ချိ
ထို့အပြင်ဟော်မုန်း (CRH) ထုတ် corticotropin အဖြစ်လူသိများ CRF, စိတ်ဖိစီးမှုမှ adaptation နှင့်ဆက်စပ်သောအမျိုးမျိုးသောအပြုအမူအပြောင်းအလဲများကိုလည်းဆောင်ကြဉ်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်အချက်မှာ CRF စနစ်၏ Dysregulation ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး compulsive ရောဂါ, Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့် Sud အဖြစ်စိတ်ရောဂါမမှန်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်s ကို (ကိုးလ် et al ။ , 1990; Sarnyai et al ။ , 1992, 2001; Cador et al ။ , 1993; Koob နှင့် Kreek, 2007; Koob နှင့် Le Moal, 2008a) ။ Footshock-သွေးဆောင်စိတ်ဖိစီးမှုသည် Le et al (အရက်၏ reinstatement inducing အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , 1998, 2000; ဓာတ်ငွေ့နှင့်သံလွင်, 2007; Richards et al ။ , 2008), နီကိုတင်း (Buczek et al ။ , 1999), ကိုကင်း (Erb et al ။ , 1996), opiate နှင့် psycostimulants (Lu et al ။ , 2003) နှင့်ဘိန်းဖြူ (Shaham et al ။ , 1997) ရှာ။ အထူးသ CRF မူးယစ်ဆေး reinstatement (Shaham et al နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ , 1997; le et al ။ , 2002; လျူနှင့် Weiss, 2002; funk et al ။ , 2006) ။ CRF လည်းနာတာရှည်အီသနော (Baldwin et al ကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူထုတ်လုပ်ပြသလျက်ရှိသည်။ , 1991; Overstreet et al ။ , 2004) နှင့်ဇွဲအားနည်းချက်များနှင့်နောက်ဆုံး relapse တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ CRF စနစ်ကလေး ligands ပါဝင်ပါသည်: CRF, urocortin (UCN) (Vaughan et al ။ 1995) 1,2နှင့်3နှစ်ခု, G-ပရိုတိန်း-coupled receptors (GPCR), CRF-receptor 1 (CRF-R1) နှင့် CRF-receptor2(CRF-R2) အဖြစ်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု CRF binding ပရိုတိန်း (CRF- ကို BP); စားပွဲတင်တွေ့မြင် Table11 နှင့် (ဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, 2004) CRF စနစ်အားပြန်လည်သုံးသပ်။
Factor (CRF) စနစ်ဖြင့်ထုတ်လွှ Corticotropin.
CRF ligand CRF-R1> CRF-R2 ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေ PVN အတွက်ဖန်တီး အူ, အရေပြား, adrenal gland HPA ဝင်ရိုး: HPA ဝင်ရိုးအပြင်ဘက်တွင် ACTH လွှတ်ပေးရန် induces: ထိန်းချုပ်မှုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု
CRF-R1 အဲဒီ receptor - CC ကို, သမဝါယမ, MS, HIP, VTA, amygdala, pituitary βဆဲလ်ပန်ကရိယ anxiogenic
CRF-R2 အဲဒီ receptor - RN, LS, hy, က CP နှလုံး, GI, အဆုတ်, အရိုးကြွက်သား, vasculature anxiogenic / anxiolytic
CRF-BP binding ပရိုတိန်း - CC ကို, hy, amygdala, VTA plasma, amniotic အရည်, ချင်း, pituitary gland, အသည်း အစွန်အဖျား: CRF CNS neutralizes: အတိအကျမသိရသေး
UCN 1 ligand CRF-R1 / CRF-R2 EW GI, testis, နှလုံး myocytes, thymus, အရေပြား, သရက်ရွက် အစွန်အဖျား။ နှလုံးပျက်ကွက် (Wright et al အတွက်မွှငျ့တငျ 2009) CNS ။ excitatory glutamatergic Synaptic ဂီယာ (လျူ et al modulate, 2004)
UCN2ligand CRF-R2 hy, brainstem, ကျောရိုး နှလုံး, သွေးဆဲလ်တွေ, adrenal gland အလယ်ပိုင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ် (Reyes et al ။ , 2001စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်) ကျား, မခြားနားချက် (Chen က et al ။ , 2006)
UCN3ligand CRF-R2 hy, amygdala GI, ပန်ကရိယ စွမ်းအင် homeostasis (Li က et al ။ , 2007) anxiolytic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ (Valdez et al ။ , 2003)
CeA, အ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ; သမဝါယမ, cerebellum; CC ကို, ဦးနှောက် cortex; က CP, choroid plexus; EW, အ Edinger Westphal နျူကလိယ၏ဆဲလ်အသေကောင်; GI, အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း; HIP, hippocampus; hy, hypothalamus; LS, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum; က MS, medial septum; OLF, olfactory ဧရိယာ; PVN, အ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ; RN, raphe အရေးပါ။
ဒါဟာမူလက, အ anterior pituitary (Guillemin နှင့် Rosenberg ကထဲကနေ adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) Secret လှုံ့ဆော်ဖို့တာဝန်ရှိတစ်ဦး hypothalamic အချက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် 1955; Saffran et al ။ , 1955) က adrenal cortex (Turnbull နှင့် Rivier, ဖွဲ့စည်းရန် glucocorticoid ပေါင်းစပ်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်ဘယ်မှာ 1997) ။ ၎င်းအမည်ကို ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဇီဝဓာတုဗေဒဆိုင်ရာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမပြုမီအနှစ်သုံးဆယ်ကတည်ထောင်ခဲ့သည် (Vale et al ။ , 1981) ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်များအတွက်အမျိုးသားစင်တာ (NCBI) အတွက်၎င်း၏ဗီဇအမှတ်အသား CRH ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။ ဒါဟာ 4.7-ကီလို-Dalton (KDA) peptide သည်နှင့် 41-အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန်များပါဝင်ပါသည်။ အဆိုပါ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယ (PVN) ၏ Neurosecretory အာရုံခံ CRF (Meloni et al synthesize ။ , 2005) ။ CRF ထို့နောက် anterior pituitary gland ဖို့ afferent ပေါ်တယ်သွေးကြောသို့ဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ် ကစနစ်တကျလည်ပတ်အတွက် ACTH လွှတ်ပေးရန် induces ဘယ်မှာ။ အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) ဝင်ရိုးအထူး PVN နှင့် hippocampus အတွက် glucocorticoid receptors ကိုသက်ဝင်သည်ဟု glucocorticoids ကနေအပျက်သဘောတုံ့ပြန်ချက်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ကို CRF လည်းဖိအားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ HPA ဝင်ရိုးအပြင်ဘက်တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ် (Palkovits et al ။ , 1983; Swanson et al ။ , 1983) မူးယစ်ရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အပါအဝငျ။
CRF ဟာအစွန်အဖျားနှင့်ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးဖြန့်ဝေထားတဲ့ CRF-R1 နှင့် CRF-R2 ကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့်ဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု, mediates (De Souza, 1995; ဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, 2004) ။ ဒါဟာ CRF-ရူပီးမှ CRF ၏စည်းနှောင်နှစ်ခြေလှမ်းယန္တရားကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ အဲဒီ receptor ၏ N-terminus ပိုင်းတွင်အဲဒီ receptor (ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al တစ်ပြန်စီစဉ်စတင်ရာ CRF ၏ C-terminus မှချည်နှောင်။ , 2007) ။ အဆိုပါ CRF N-terminus အဆက်အသွယ်ကအဲဒီ receptor အပေါ်အခြားက်ဘ်ဆိုက်များဆယ်လူလာအချက်ပြ (ခြိုငျ့ et al စတင်ရန်။ , 1981; Rivier et al ။ , 1984) နှင့်အကျိုးဆက် G-ပရိုတိန်း (Nielsen et al ကိုသက်ဝင်။ , 2000; ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ , 2004; Rijkers et al ။ , 2004; Yamada et al ။ , 2004; ပြုခဲ့, 2005) ။ အဆိုပါ CRF စနစ်က CRF မှဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ homology နှင့်အတူအခြားအ peptides ပါဝင်သည်။ UCN 1 CRF နှင့်အတူ 45% sequence ကိုဝိသေသလက္ခဏာပြသခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံး CRF အဲဒီ receptor Subtype (Perrin et al မှမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူချည်နှောင်။ , 1995), သော်လည်း CRF CRF-R1 (Vaughan et al မှအမြင့်မားဆုံးဆှဖှေဲ့နှင့်အတူချည်နှောင်။ , 1995; ဘားနက်, 2005) ။ ဒါ့အပြင်အထူးသ CRF-R2 (Hsu နှင့် Hsueh မှ stresscopin ချည်နှောင်အဖြစ်လူသိများလည်း stresscopin ဆက်စပ် peptide အဖြစ်လူသိများ UCN 3, နှင့် UCN 2, 2001; Lewis က et al ။ , 2001; Reyes et al ။ , 2001).
CRF-R1 415 အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန်ရှိပြီးကအစွန်အဖျား၌၎င်း, CNS (Chang et al အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။ , 1993; ချန် et al ။ , 1993; Vita et al ။ , 1993; အိုးထိန်းသမား et al ။ , 1994; Tsai-မောရစ် et al ။ , 1996; Sanchez et al ။ , 1999; ဗန် Pett et al ။ , 2000). CRF အားဖြင့် CRF-R1 ၏ activation ကကမကထပြုခဲ့နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုစိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် (Arborelius et al ။ , 1999); CRF-R1 ရန် Funk et al (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူလျှော့ချရန်ပြခဲ့ကြ။ , 2007) ။ CRF-R1 (CRF-R1 ထွက်ခေါ (KO) ကြွက်) ၏ဖျက်မှုနှင့်အတူ Transgene ကြွက်ပြည့်စုံပြန်လည်သုံးသပ်မြင် (ဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, အဘို့, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကနှစ်ဦးစလုံးမှတုံ့ပြန်မှုကိုလျှော့ချကြပါပြီ 2004) ။ ဤသည် anxiolytic အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သော် Tronche et al (preclinical မော်ဒယ်များအတွက် glucocorticoids ပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွက်လျော့ချရေးမှစွပ်စွဲနိုင်ပါသည်။ , 1999) ။ တစ်ဦးကခြွင်းချက် KO mouse ကိုလိုင်း neuroendocrine CRF-mediated CRF-R1 အချက်ပြလမ်းကြောင်းကနေအမူအကျင့်ခွဲခြားရန်ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ limbic အဆောက်အဦများ၏, ဒါပေမယ့်မ HPA စနစ်၏ရွေးချယ် inactivation CRF-R1 စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ modulates ကြောင်းပြသထားပါတယ်ကြောင့် HPA (Muller et al ၏လွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ , 2003) ။ ထို့အပွငျ CRF-R1 Hansson et al (အရက် relapse အပြုအမူတွေမှလွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးမြှင့်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ , 2006; Heilig နှင့် Koob, 2007) ။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှု CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်အတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိနှစ်ဦးစလုံး HPA CRF-R1 အချက်ပြမှတဆင့် CRF စိတ်ဖိစီးမှု-related အရက်သောက်အပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ (Molander et al ရှိစေခြင်းငှါပြသလျက်ရှိသည်။ , 2012).
α, βနှင့်γ: CRF-R2 သုံးမျိုးကွဲရှိပါတယ်။ အဆိုပါα 411 အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန်များ၏ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်β 413-418 အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန်များ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နှစ်ဦးစလုံးဦးနှောက်နှင့်အစွန်အဖျား၌တွေ့ကြ၏ သို့သော် CRF-R2βအများစုဟာနှလုံးနဲ့ vasculature (Lovenberg et al တွေ့ရပါသည်။ , 1995a,b; Kimura et al ။ , 2002; ဘားနက်, 2005) ။ အဆိုပါγမူကွဲသာ 397 အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန်င်တစ်ဦးသေးငယ် peptide ဖြစ်ပါသည်, သာလူ့ဦးနှောက် (Kostich et al တွေ့ရပါသည်။ , 1998) ။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက် CRF-R2 ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍပြင်းထန်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ CRF-R2 (CRF-R2 KO ကြွက်) ၏ဖျက်မှုနှင့်အတူမျိုးရိုးဗီဇ mouse ကိုမော်ဒယ်လေ့လာမှုများ CRF-R2 ၏ CRF activation အယ်လ်ဘေးလ် et (ဖိအားဖြစ်စေတစ်ခုတိုးလာသို့မဟုတ်လျော့နည်းသွားတုံ့ပြန်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောသရုပ်ပြခဲ့ကြ။ , 2000, 2002; ကုန်ကျစရိတ် et al ။ , 2000; Kishimoto et al ။ , 2000).
immunohistochemical စမ်းသပ်ချက်များနှင့် ligand စည်းနှောင်ချဉ်းကပ်မှု၏အနိမ့် resolution ကိုထောက်ပံ့သောတိကျတဲ့ antisera ၏မရှိခြင်း CRF-ရူပီးဖြန့်ဖြူး elucidate နှင့် mRNA အဆငျ့မှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကန့်သတ်နိုင်ရန်လေ့လာမှုများကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီအတားအဆီးကိုကျော်လွှားရန်, အစိမ်းချောင်းပရိုတိန်း (GFP) နဲ့ CRF-R1 ၏စကားရပ်သတင်းပေးပို့တဲ့ Transgene mouse ကိုအောင်မြင်စွာစိတ်ဖိစီးမှုလိုက်လျောညီထွေ (တရားမျှတရေး et al အတွက်အချက်ပြ CRF-R1 ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ဝတ္ထု tool ကိုထောက်ပံ့နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လျက်ရှိသည်။ , 2008).
CRF-BP ရေတွင်ပျော်ဝင်, 37 KD ပရိုတိန်းသည်နှင့် 322 အမိုင်နိုအက်ဆစ်အကြွင်းအကျန် (ဘေးလ်နှင့်ခြိုငျ့, ပါဝင်ပါသည် 2004) ။ ဒါဟာထိထိရောက်ရောက်အတွင်းသို့ granules သို့သိမ်းဆည်းထားနှင့် exocytosis (Blanco et al မှတဆင့် extracellular အာကာသသို့ဖြန့်ချိနေတဲ့လျှို့ဝှက်ချက် glycoprotein ဖြစ်ပါတယ်။ , 2011) ။ ဒါဟာ CRF-BP CRF (Suda et al မှ binding များအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်း aspargine N-နှင့်ဆက်စပ်-type အမျိုးအစား oligosaccharides ပါရှိသည်။ , 1989) ။ CRF-BP ၏သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူး inhibitors ဖော်ထုတ်ရန်ယခင်ကြိုးစားမှုကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် CRF-BP (Behan et al မှ binding CRF ၏မြင့်ဆှဖှေဲ့ (picomolar) ကိုကန့်သတ်အောင်မြင်မှုထုတ်လုပ်ခဲ့ကြ။ , 1995a) နှင့်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CRF-BP အပြည့်အဝအရှည် (FL) ဝုဒ် et al (autocatalytic proteolysis မှဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ , 1999) ။ အဆိုပါအလိုအလျောက် proteolytic cleavage CRF နှင့်တစ်ဦးပိုမိုသေးငယ်, 27 KD ကို C-terminal ကိုအပိုင်းအစ, CRF-BP (27 KD) အတွက်စည်းနှောင် site ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရာ 9.6 KD ၏ပိုကြီးတဲ့ N-terminal ကိုအပိုင်းအစ, CRF-BP (10 KD), (ဝုဒ်ဖြစ်ထွန်း et al ။ , 1999) မျှသိသာဇီဝကမ္မသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ။ CRF-BP (FL) အတွက်ထူးခြားတဲ့ cleavage site ကိုအမိုင်နိုအက်ဆစ်များအကြားဖော်ထုတ်ထားပြီး serine 234 နှင့် alanine 235 residues ။ နှစ်ခုအပိုင်းအစများ၏မျိုးဆက်ကအလွန်ခက်ခဲအောင်မြင်စွာဇာတိပရိုတိန်း၏ဇီဝကမ္မဂုဏ်သတ္တိများလေ့လာဖို့ CRF-BP (FL) ၏လုံလောက်သောပမာဏသန့်ရှင်းစေရန်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ CRF-BP သွေးရည်ကြည်, amniotic နှင့်စေး, အချင်း, အ pituitary gland, အသည်း၌၎င်း, ဦးနှောက် cortex, အ hippocampus (Behan et al အပါအဝင်အများအပြားကွဲပြားဦးနှောက်ဒေသများအတွက်ဖြန့်ဝေနေသည်။ , 1995a), အ amygdala (Herringa et al ။ , 2004) နှင့် VTA (ဝမ်နှင့် Morales, 2008) ။ အဆိုပါအစွန်အဖျား၌, ပျံ့နှံ့နေတဲ့ CRF-BP Kemp et al (CRF ၏ဇီဝကမ္မလုပ်ရပ်များ neutralizes ။ , 1998) ။ သောကြောင့် CRF နှင့်အတူမြင့်မားဆှဖှေဲ့, အဲဒါကို CRF-BP အခမဲ့ CRF ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကြားခံအခန်းကဏ္ဍယုံကြည်ကြသည်။ ဦးနှောက်အတွက်, သို့သော်, CRF-BP အများအားဖြင့်အမြှေးပါး-ဘောင်းနှင့်အာရုံခံခြင်းနှင့် neuroglial ဆဲလ် (Behan et al အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပမာဏသာရှိပါကြောင်း, တစ်ခုဖြစ်သည်။ , 1995b) ။ အာရုံခံဆဲလ်အတွင်းမှာမကြာသေးခင်ကတွေ့ရှိချက် VTA dopaminergic နှင့်γ-aminobutyric အက်ဆစ်၏ discrete subpopulations (GABAergic) အာရုံခံ, (ဝမ်နှင့် Morales CRF-BP ဖော်ပြကြောင်းသရုပ်ပြ 2008) ။ ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (CNS) တွင် CRF-BP ၏ဇီဝကမ္မအခန်းကဏ္ဍရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သီအိုရီ Seasholtz et al (CRF-BP ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေ CRF ၏ရှင်းလင်းရေးကူညီစေခြင်းငှါလည်းပျက်စီးခြင်းထံမှ CRF ကာကွယ်ပေးစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2002) ။ CRF-BP (CRF-BP KO ကြွက်) ၏ဖျက်မှုနှင့်အတူမျိုးရိုးဗီဇ mouse ကိုမော်ဒယ်လေ့လာမှုများစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူတစ်ခုတိုး (Karolyi et al လည်းမရှိပြသကြ။ , 1999) ။ E ကိုlectrophysiology လေ့လာမှုများ N-methyl-D-aspartate (NMDA) potentiate မှ CRF-R2 မှတဆင့် CRF အချက်ပြမှုများအဆိုပါ VTA အတွက် excitatory postsynaptic ရေစီးကြောင်း (EPSCs) -mediated ကြောင်းပြသကြ (Ungless et al ။ , 2003) ။ ထို့အပွငျ CRF (6-33), အ CRF-BP binding site ကိုမှာ CRF နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ပေမယ့် CRF-R2 မှခညျြနှောငျပါဘူးတဲ့ peptide သုံးပြီးအဲဒါကို NMDAR-mediated EPSCs ၏ CRF-သွေးဆောင်အလားအလာ (Ungless ပိတ်ဆို့ကြောင်းပြသခဲ့သည် et al ။ , 2003) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤရလဒ်များကို CRF-BP ဟာ CRF-system ကိုပြောင်းလဲပစ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအခန်းကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း စသည်တို့အတွက် နှင့် Vivo အတွက် လေ့လာမှုများ, စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်လုံလောက်သောပမာဏလူ့ CRF-BP (FL) ကိုစင်ကြယ်စေ (ဝုဒ် et al ယနေ့အထိအောင်မြင်သောမရှိခဲ့ပါ။ , 1997) ။ ဆဲလ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် CRF-BP ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် CNS အတွက် CRF-BP ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလက္ခဏာမှမရရှိနိုင်ပါမည်သည့်သုတေသန tools များရှိခဲ့သည်ကြပြီမဟုတ်။ ဒါကြောင့် CRF-BP ဟာ CRF-R2 အချက်ပြအတွက်အထူးပါဝင်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်သောမရှိခဲ့ပါ။ စွဲလမ်းစေအပြုအမူအတွက် binding အဆိုပါ CRF များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ဇယားမှာဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ် Table22.
စွဲလမ်းစေအပြုအမူတွေအတွက် binding အဆိုပါ CRF ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု.
CRF-R1 ရန် မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာနှင့်ဆက်စပ်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse Attenuate; သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးများနှင့် peptides စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ
CRF-R2 ရန် စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေမရှင်းလင်းဖြစ်၏ သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးများနှင့် peptides စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ
CRF-BP ရန် အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု Modulation အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုနှစ်ခုစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်ပစ်မှတ်ဖြစ်မည်အကြောင်း, သာ peptides စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ
စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးစွဲ: CRF-mediated neurotransmission နှင့် plasticity
အားဖြည့်: ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens (NACC)
စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါး NACC အတွက် dopamine များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ပြသခဲ့ကြသည်။ ထို့အပွငျ dopamine တို့၏စီးပွါးအပြုသဘောစစ်ကူ (Fibiger ၏ hedonic သက်ရောက်မှုများ amplification နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်, 1978; Berridge et al ။ , 1989) နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ (Yokel နှင့်ပညာရှိများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် 1975; Bonci နှင့် Malenka, 1999; ပညာရှိ 2008) ။ အဆိုပါ NACC အဆိုပါ VTA ဆီက input ကိုလက်ခံရရှိကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှု၏စူးရှသောပျော်မွေ့ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းအနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဘို့မသာတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-ရှာကြံအပြုအမူတွေ (Koob နှင့် Nestler ပေါ်တွင်တွေကိုသက်ရောက်မှုစေခြင်းငှါထင်နေသည် 1997).
အဆိုပါ VTA အတွက် CRF ဆယ်လူလာပါဝင်ပတ်သက်မှု
အဆိုပါ VTA အများစုမှာ hypothalamus ၏ limbic forebrain နှင့် PVN ထံမှ CRF စီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံ (Rodaros et al ။ , 2007) ကြောင်းပုံစံ glutamatergic synapses နှင့်အချိုးကျတဲ့ GABAergic synapses (Tagliaferro နှင့် Morales, 2008). အဆိုပါ PVN CRF ပေါင်းစပ်ဘို့ဆိုက်ဖြစ်ပါသည် (Meloni et al ။ , 2005) နှင့်အချိုးမညီ synapses (glutamatergic) ၏အများစု CRF- နှင့် dopaminergic ပါဝင်သောအာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ VTA dopaminergic အာရုံခံ CRF-R1 ဖော်ပြ (ဗန် Pett et al ။ , 2000) နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုမကြာသေးမီလေ့လာမှုကြောင်း t ကိုပြတော်မူပြီCRF-BP ဖော်ပြ VTA အာရုံခံ၏သူအများစု dopaminergic များမှာ (ဝမ်နှင့် Morales, 2008).
Tသူက system ကို CRF-R1 နှင့် CRF-R2 ကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် dopaminergic အာရုံခံ modulates CRF; သို့သော် CRF မဟုတ်မှသာ dopaminergic စနစ်၏ neuroexcitability အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်။ အဆိုပါ VTA CRF-glutamatergic- နှင့် CRF-GABAergic ပါဝင်သောအာရုံခံနှစ်ဦးစလုံးထံမှသွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိချိန် မှစ. ဒါဟာအစ excitatory နှင့် inhibitory Synaptic သွင်းအားစုပြောင်းလဲပစ်ဘို့တာဝန်ရှိဖြစ်နိုင်သည် (Tagliaferro နှင့် Morales, 2008) နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ် Borgland et al ကြည့်ပါ။ (2010).
CRF VTA dopaminergic အာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကိုတိုးပွားစေ (Korotkova et al ။ , 2006; Wanat et al ။ , 2008) CRF-R1 မှတဆင့်နှင့်များ၏တိုးမြှင့်အတူ phospholipase ကို C (PLC) -protein kinase ကို C (PKC) အချက်ပြလမ်းကြောင်းကပါဝင်ပတ်သက် Ih (hyperpolarization-activated လက်ရှိအတွင်း) (Wanat et al ။ , 2008) ။ CRF လည်း CRF-R2 နှင့် PLC-PKC အချက်ပြလမ်းကြောင်း၏ activation မှတဆင့် NMDA-mediated Synaptic ဂီယာတစ်ခုယာယီဖြည်းဖြည်းချင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲအလားအလာသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ CRF-R2-mediated အလားအလာ CRF-BP (Ungless et al ၏ရှေ့မှောက်တွင်လိုအပ်မှပြသလျက်ရှိသည်။ , 2003) ။ CRF-R2 နှင့် CRF-BP ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားအထူးသရရှိနိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ် CRF-R2 ပစ်မှတ်ထားကြောင်း CRF-BP နှင့် antisera လေ့လာဖို့လိုအပ်သည့်သုတေသန tools များအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
CRF အဆိုပါ VTA အတွက် dopaminergic အာရုံခံအပေါ် excitatory နှင့် inhibitory နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ရပ်များရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသော။ ကိုကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးကိုသုံးပြီးလေ့လာရေးကြောင်းပြသကြ dopaminergic အာရုံခံအပေါ် CRF ၏ excitatory အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်ဆန်စွာဖြစ်ရပ်များကပါဝင်ပတ်သက်ဥပမာအားအရေးယူအလားအလာပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းနှင့် NMDAR-mediated Synaptic ဂီယာ, CRF ၏ inhibitory သက်ရောက်မှုရေရှည် plasticity မှုမယ်လို့ Synaptic ဂီယာ၏နှေးကွေးသောပုံစံများပါဝင်နေစဉ် (Beckstead et al ။ , 2009). သူများသည်လေ့လာတွေ့ရှိချက် CRF dopamine အပေါ် Synaptic အရေးယူဖျန်ဖြေကြောင်း receptors အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ရပ်များရှိစေခြင်းငှါသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်ဆယ်လူလာယန္တရား dopamine-mediated အပြုအမူတွေအပေါ် CRF လုပ်ရပ်များအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုသနျ့စခွေငျးငှါ (Beckstead et al ။ , 2009).
က CRF-R2 CRF-R1 ၏အလားအလာပြပေမယ့်မရထားပြီးသည့်အတိုင်းအချက်ပြ CRF-BP (Ungless et al ၏ရှေ့မှောက်တွင်လိုအပ်သည်။ , 2003), က Bonci နှင့် Malenka (CRF-BP နှင့် CRF-R2 Synaptic plasticity ၏ကြာကြာ-တည်မြဲပုံစံများကိုဖျန်ဖြေကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ 1999) ။ B ကoth အပြုအမူအာရုံခံစားမှုနှင့်ရေရှည်အလားအလာ (LTP) ထိုသို့သော VTA dopaminergic အာရုံခံအတွက် LTP ၏ induction များအတွက် NMDAR activation များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဖြစ်အများအပြားဝိသေသလက္ခဏာများကိုမျှဝေ (Bonci နှင့် Malenka, 1999; Ungless et al ။ , 2001) ။ တစ်ဦးကsa အကျိုးဆက်ကြောင့် VTA dopaminergic အာရုံခံအပေါ် excitatory synapses မှာ Synaptic plasticity အပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုထွက်လာပါတယ်အတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီးအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NMDAR activation VTA dopaminergic အာရုံခံအတွက် LTP ၏ induction ဘို့လိုအပ်ပါသည်ကတည်းက CRF-ရူပီး activation plasticity ၏ကြာကြာ-တည်မြဲပုံစံများ modulate စေခြင်းငှါ (Bonci နှင့် Malenka, 1999; Ungless et al ။ , 2001; Bonci နှင့် Borgland, 2009).
CRF-mediated neurotransmission နှင့် plasticity
စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးလေ့လာမှုများအတွက်အာရုံခံဆားကစ်၏ပြုပြင်အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာလို့ Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်ကျင်းပေါင်းလက္ခဏာကြောင်းအပြုအမူနှင့်မှတ်ဉာဏ်စရိုက်များအတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသခဲ့ကြသည်။ မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ာင်းအခြေခံအဆိုပါ neuroplasticity ကစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်အတွက်အရေးပါသည်နှင့်စွဲအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် compulsive အပြုအမူတွေကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုသောမော်လီကျူးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကိုယ်စားပြုခြင်းငှါအကြံပြုကြောင်းသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
CRF အာရုံခံ၏ axon ဆိပ်ကမ်း VTA အာရုံခံ dendrites (Tagliaferro နှင့် Morales, ပေါ်သို့ synapse 2008) နှင့်ကစိတ်ဖိစီးမှုကဒီဒေသအတွက် CRF လွှတ်ပေးရန်သာသက်ရောက်ပုံ (ဝမ် et al ။ , 2006) ။ Electrophysiological လေ့လာမှုများ CRF-BP CRF-R2 အထူးသ (Ungless et al မှတဆင့် CRF အားဖြင့်ရူးနှမ်း NMDAR-mediated Synaptic ဂီယာတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ, ယာယီအလားအလာများအတွက်လိုအပ်ကြောင်းပြသကြ။ , 2003) ။ ဤရလဒ်သည်မူးယစ်ဆေး-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များ (ဝမ် et al ၏ကင်းရှာထဲမှာအချိုမှုများနှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်ထွက်လာပါတယ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏ထိရောက်မှုကိုဆုံးဖွတျကွောငျးကိုအမူအကျင့်လေ့လာမှုများအားဖြင့် corroborated ပါပြီ။ , 2007b) ။ ဦးနာတာရှည်ကင်း preclinical မော်ဒယ်များသီခငျြးဆိုလေ့လာမှု CRF နှင့်အတူဆက်စပ်အပြုသဘောအားကောင်း, အ dopaminergic စနစ်ဖြင့်အထူး CRF / CRF-R2 / CRF-BP အပြန်အလှန်ပြသခဲ့သည်။ သူများသည်တွေ့ရှိချက်ဆဲလ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး CRF-BP ချဉ်းကပ်ဝတ္ထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နောက်ထပ်သုတေသနအားထုတ်မှုကိုထောက်ပံ့။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ CRF အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုကနေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ Synaptic plasticity ၏ VTA ပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်သို့မဟုတ် induction လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအရာ, VTA glutamatergic Synaptic function ကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းရေရှည် neuroadaptations ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။ အမူအကျင့်လေ့လာမှုများနှင့်အတူပေါင်းစပ် Electrophysiological လေ့လာမှုများအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူယခင်အတွေ့အကြုံကမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေလျက်နှင့်ထိုကြောင့်, relapse မောင်းထုတ်ရန်စိတ်ဖိစီးမှုများ၏စွမ်းရည်ကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါအဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရလဒ်သည် CRF VTA dopaminergic အာရုံခံအတွက်မူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများထံမှဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကရှင်းပြသည်သောမော်လီကျူးအလွှာကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ amygdala အတွက် CRF ၏ cellular ပါဝင်ပတ်သက်မှု
အဆိုပါ amygdala စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုများအတွက်အရေးပါသောဦးနှောက်ဒေသဖြစ်ဟုယုံကြည်ကြောင်းအာရုံခံသတင်းအချက်အလက် (အဒေါ့ဖ် et al မှထိခိုက်စေ salience ပေးဘို့အရေးပါဖြစ်ပါတယ်။ , 1994; LeDoux, 2003; Phelps နှင့် LeDoux, 2005) ။ အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှုကတော့အေးစက်ကွောကျရှံ့သောတုန့်ပြန် (Davis က, လေ့လာနေအားဖြင့် amygdala ၏တိကျသောအရေးပါအတွက်လေ့လာခဲ့ကြပြီ 1992a,b) ။ အဆိုပါ amygdala ကြောင့်အာရုံခံခြင်းနှင့်သိမြင်မှုသတင်းအချက်အလက်များပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့်နေရာတွင်အခြားအ limbic ဒေသများ (LeDoux မှကျယ်ပြန့်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါသည် 1992, 1993). စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားအခိုင်အမာဒီစနစ်အပေါ်အလွဲသုံးမှုလုပ်ရပ်၏မူးယစ်ဆေးအကြံပြုနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်းအထူးသဖြင့် Synaptic ဖြစ်ရပ်များမွမ်းမံနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ VTA အီသနော၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ် (Gatto et al ထားပြီးနေစဉ်။ , 1994), GABAergic စနစ်၏ activation အရက်၏ anxiolytic အကျိုးသက်ရောက်မှု (Frye နှင့် Breese, 1982) ။ ထိုကဲ့သို့သော yohimbine နှင့် footshock အဖြစ်ကြိုးပု NACC ၏ shell ကို၏ဆားကစ်နှင့် pharmacological ဖိအားများက activated ဦးနှောက်ဒေသများ, အပြင်ခုနှစ်တွင် basolateral နှင့်ဗဟို amygdalar အရေးပါအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်, နှင့် stria terminalis (BNST) ၏အိပ်ရာနျူကလိယ (Funk et al ။ , 2006) ။ Preclinical လေ့လာမှုများအီသနောထံမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆုတ်ခွာဒီ circuit ကိုနာတာရှည်အီသနောထိတွေ့မှု (ခရစ်ယာန် et al အောက်ပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ရေရှည်တိုးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းဆန္ဒပြ, ကြွက်များ၏ amygdala အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးအပြောင်းအလဲများကို induces ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ , 2012).
အဆိုပါ amygdala ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုမှအခြေအနေများနှင့်ခြွင်းချက်မရှိတုံ့ပြန်မှု mediates (Davis ကနှင့် Whalen, 2001) နှင့်ကဆန္ဒရှိခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးသောအခြေအနေများလှုံ့ဆော်မှုချိတ်တွဲခြင်းဖြင့် Pavlovian ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်သုံးပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ချွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုများ၏ပြန်လည်ထိတွေ့မှုကတော့အေးစက်-ခြွင်းချက်မရှိအသင်းအဖွဲ့ (Pitt et al အားဖြင့်ဆင်းသက်လာတဲ့ conditional ကိုကွောကျရှံ့တုန့်ပြန် elicits ။ , 2009) ။ အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့ signal ကိုပု basolateral amygdala (BLA) တွင်ရာအရပ်ကိုကြာထို့နောက် amygdala (CeA) (မက်ဒေါ်နယ်၏ဗဟိုနျူကလိယမှကူးစက် 1998; Maren, 1999; Davis ကများနှင့်ရှီ, 2000; Pitkanen et al ။ , 2000; et al Pare ။ , 2004) ။ ဤသည်ဂီယာဖြစ်စဉ်ကိုအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုအသင်းအဖွဲ့များပါဝငျသညျ။
အဆိုပါ CRF စနစ်၏အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများ, CRF, CRF-ရူပီးနှင့် CRF-BP ဟာ amygdala အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ် (Potter et al ။ , 1994) ။ F ကိုurthermore, အ amygdala CRF ပါဝင်သောအာရုံခံ၏အဓိက extrahypothalamic အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် (Palkovits et al ။ , 1983; ဗန် Pett et al ။ , 2000) ။ နှစ်ဦးစလုံး BLA နှင့် CeA အရေးပါစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု (ရစ်ချတာ et al တစ်ကဏ္ဍမှပါ။ , 1995; Merali et al ။ , 1998; Koob နှင့် Heinrich, 1999) ။ ကျယ်ပြန့်လေ့လာမှုကြောင်းပြသကြ CRF စနစ် BLA-CeA circuit ကိုပါဝငျကွောငျးမှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးအတွက်ပါဝင် (Roozendaal et al ။ , 2002; Hubbard et al ။ , 2007) ။ ဒါဟာ amygdala အတွက် CRF လွှတ်ပေးရန်စူးရှဆုတ်ခွာ (ငလျင်နှင့် Weiss စဉ်အတွင်းတိုးပွားလာကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်, 1999); ထို့ကွောငျ့, ဒါကြောင့် (CRF မူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity modulate စေခြင်းငှါတွေးဆထားသည်Ungless et al ။ , 2001, 2003) နှင့်မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, (Luscher နှင့် Malenka တွေ့မြင်, 2011) ။ အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်များအတွက်အာရုံခံအခြေခံလျော့နည်းကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်သည်, သို့သော် ပို. မကြာသေးမီအပြုအမူလေ့လာမှုများ CRF ကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာ (Pollandt et al အောက်ပါ CeA နှစ်ပတ်အတွင်းအတွက် CRF-R1 မှတဆင့် excitatory Synaptic ရေစီးကြောင်း potentiating နိုင်စွမ်းကြောင်းပြသကြ။ , 2006).
မကြာသေးမီကလေ့လာမှု CRF-R1 အထူးသ Refojo et al (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအတွက် bidirectional အခန်းကဏ္ဍဝင်စားကြောင်း။ , ပြသခဲ့သည် 2011) ။ နှစ်လယ်ပိုင်းဦးနှောက် dopaminergic အာရုံခံအတွက် CRF-R1 ၏ဖျက်မှုကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးပွါးနှင့် prefrontal cortex အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့ကျစေပါတယ်စဉ်အခါ, forebrain glutamanergic အာရုံခံကွန်ယက် CRF-R1 ၏ဖျက်မှုကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့် amygdala နှင့် hippocampus (Refojo et အတွက်ဂီယာ disrupts အယ်လ်။ , 2011).
CRF ၏အခန်းကဏ္ဍကိုလည်း (Bjork et al တွေ့မြင် preclinical မော်ဒယ်များအတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲသုံးပြီးမိမိဆန္ဒအလျောက်အီသနောစားသုံးမှုအတွက်ကျယ်ပြန့်အကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ , 2010) ကျယ်ပြန့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့။ အီသနော-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်, အီသနောစားသုံးမှု CRF-R1 ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်လျှော့ချခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ (Logrip et al လျော့ချကြောင်း pharmacological ကြားဝင်သုံးပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ , 2011; Zorrilla နှင့် Koob, 2012) ။ အီသနောစားသုံးမှု၏အဆိုပါလျှော့ချရေးကိုလည်း (CRF-R1 (CRF-R1 KO) ၏ဖျက်မှုနှင့်အတူ Transgene ကြွက်တွေမှာ Chu et al လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ , 2007) ။ CRF-R1 ရန်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာ-ဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအီသနောထိတွေ့မှု (Ghitza et al နှင့်ဆက်စပ်အီသနော၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်သက်ရောက်မှု attenuate ။ , 2006; Marinelli et al ။ , 2007; လီ et al ။ , 2007; Koob နှင့် Le Moal, 2008b; Richards et al ။ , 2008) ။ CRF-R1 inhibitors Shaham et al (လေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse attenuate ပြခဲ့ကြ။ , 1998) နှင့်အများအပြားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ (Koob နှင့် Zorrilla အခြေအနေများအရပျကို preference ကို၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reactivity ကိုလျှော့ချရန်, 2010).
အာရုံခံဖော်ပြ CRF ဆံ့သော extrahypothalamic အဆောက်အဦတွေထဲမှာက "တိုးချဲ့ amygdala ။ " ရှိအဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala တို့ NACC ၏ posterior အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းသည့် BNST, ဗဟို medial amygdala (CeA), အ sublenticular sustantia innominata နှင့်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းဇုန်အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းနေသည် (Heimer နှင့် Alheid, 1991) ။ ဒါဟာအီသနောဆုတ်ခွာ (Koob နှင့် Le Moal ကထုတ်လုပ်သည့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက် circuit ကိုကိုယ်စားပြုသည် 2001), အဂါဘမြို့သား system ကိုပြောင်းလဲထားပြီးနှင့်ကပ်လျက် CeA အတွက် CRF system ကို Roberts သည် et al (activated ခံရဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ ရာအတွက် 1996) ။ သူများသည်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala ၏ interneurons အတွင်း GABAergic လှုပ်ရှားမှုအရက်မှီခို (Koob နှင့် Le Moal အတွက်မူးယစ်ဆေးရှာဘို့စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှု၏နာတာရှည်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကဲ့သို့သောပြည်နယ်အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်စေမည်အကြောင်းညွှန်ပြ 2001; Koob, 2003, 2009a,b) ။ ထို့အပြင်တစ်ဦး On-site ကို Hybrid လေ့လာမှုတိုးချဲ့ amygdala ၏အစိတ်အပိုင်းများထဲမှာ, အလွန်အကျွံမိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှုမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလှုပ်ရှားမှု (Hansson et al တိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ဆက်နွယ်နေစေခြင်းငှါ၏တာဝန်ရှိဖြစ်စေခြင်းငှါ, CRF-R1 အချက်ပြ၏စုဆောင်းမှုကိုပြသထားပါတယ်။ , 2007).
အဆိုပါ BNST (အဖြစ် CeA ၏ကွဲပြားသောဒေသများ), စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက (Walker ကနှင့် Davis ကသူနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် 2008) နှင့် CRF (Davis က et al အချက်ပြနှင့်အတူအထူးပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ , 1997) ။ အဆိုပါ CeA နှင့် BNST ကြောက်ရွံ့သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန် (Davis က၏ရောဂါလက္ခဏာများ elucidate မှလေ့လာခဲ့ကြပြီများစွာကိုဦးနှောက်ဒေသများတိုက်ရိုက်စီမံချက်များရှိ 1992b) ။ T ကသူ BNST VTA dopaminergic အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှထိန်းညှိအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး (ဇော့နှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2002) နှင့်အကျိုးဆက်ကတော့အရက်၏စူးရှသောလုပ်ရပ်များ၏စည်းမျဉ်း, နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းထဲမှာပါဝင်ပတ်သက် (Watkins et al ။ , 1999; Carboni et al ။ , 2000; Eiler et al ။ , 2003).
အဆိုပါ BNST dopaminergic အမျှင် (Fudge နှင့် Emiliano, တစ်ခုကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်ကိုပိုင်ဆိုင် 2003) နှင့်အရှင် NMDA နှင့် Non-NMDA receptors နှစ်ဦးစလုံးကနေတဆင့် excitatory input ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသည် VTA မှကျယ်ပြန့်စီမံချက်များအားဖြင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းချိတ်ဆက် (ဇော့နှင့် Aston-ဂျုံးစ်, 2001, 2002) ။ အဆိုပါ VTA ၌ဤ dopaminergic excitatory ဂီယာ CRF (Kash et al ၏ရှေ့မှောက်တွင်လိုအပ်သည်။ , 2008) ။ acute ကင်းအုပ်ချုပ်ရေး NMDA excitatory ဂီယာ (Kash et al တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် CRF-R1-မှီခိုတိုးမြှင့်မှတဆင့်ပြ dopamine သွေးဆောင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , 2008) ။ ဤသည်ယန္တရားစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စူးရှသောသက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်နိုင်သည်သော BNST အတွက် plasticity တစ်ရေတိုရေရှည်ပုံစံ, (Kash et al အဖြစ်ဖော်ပြခံခဲ့ရသည်။ , 2008) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, BNST အတွက် glutamatergic neurotransmission အလွဲသုံးစားမှု (Walker ကနှင့် Davis က၏မူးယစ်ဆေးဝါး၏စူးရှသောအားဖြည့်လုပ်ရပ်များနှင့်အတူ function ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြု 2008).
အဆိုပါ အဆိုပါ amygdala (BLA) ၏ basolateral နျူကလိယပြင်းထန်စွာစိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှု (LeDoux အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ကို 2000), နှင့်ဆုလာဘ်အတွက် (Balleine နှင့် Killcross, 2006; Tye et al ။ , 2008) ။ တိုက်ရိုက် BLA စီမံကိန်းအတွက်ကနေအာရုံခံအဆိုပါ CeA မှအဖြစ် BNST ရန်။ အဆိုပါ BLA အများစု glutamatergic ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံခြင်းဖြင့်ရေးစပ်နှင့် CeA နှင့်အခြား limbic နှင့် cortical အဆောက်အဦများ (Sah et al ဖို့အဓိက excitatory input ကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ , 2003); သို့သော် excitatory ဂီယာတှေ့ GABAergic interneurons ၏အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်က (Washburn နှင့်မောက modulated ခံရဖို့ယုံကြည် 1992) ။ GABAergic interneurons Silberman et al (စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက၏အားပြိုင်မှုအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ။ , 2009).
CRF Sakanaka et al (CRF-R1 နှင့် CRF-BP အပြင်၌, BLA အတွက်ဖောဖောသီသီပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါတယ်။ , 1986; အိုးထိန်းသမား et al ။ , 1992; ဗန် Pett et al ။ , 2000); သို့သော် BLA အတွက် CRF များ၏သက်ရောက်မှုများ amygdala ၏အခြားအရေးပါထက်ဝေးလျော့နည်းလေ့လာခဲ့ပါပြီ။ အဆိုပါ BLA ထိုကြောင့်, စိတ်ခံစားမှုအမှတ်တရများ dampening များအတွက်တတ်နိုင်သမျှပစ်မှတ်ဖြစ်ပါသည်, ကြောက်ရွံ့မှတ်ဉာဏ်၏စုစည်းပြီးများအတွက်အရေးပါသောနျူကလိယဖြစ်ပြနှင့်ပြီ။ ဒါဟာ CRF ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် BLA တာဟာတစ် CRF-R1 ရန် (Jochman et al ၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားကြသည်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ (anorexia ဖြီးလိမ်းပုံ) ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်။ , 2005) ။ နောက်ထပ် BLA microinfusion လေ့လာမှု CRF-R1 ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဒီသက်ရောက်မှုကိုအခြား CRF-R1 ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးလုပ်ငန်းစဉ် BLA အတွက် CRF-R1 ရန်မူးယစ်ဆေး-အခမဲ့ conditional ကွောကျရှံ့သောစမ်းသပ်မှု (Hubbard et al အတွက် Contextual ခဲ၏ Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်မဟုတ်သလိုစွမ်းဆောင်ရည်မနှောင့်အယှက်ကတည်းကအထူး CRF-R2 activation နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ပုံရသည်။ , 2007) ။ BLA CRF-R1 activation သွေးဆောင် Synaptic plasticity အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်နှင့် BLA CRF-R1 activation pharmacologically သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးများကပိတ်ဆို့နိုင်သရုပ်ပြကြောက်ရွံ့မှတ်ဉာဏ်၏စုစည်းပြီးအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေပြင်းထန်သောစိတ်ခံစားမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖြေလျှော့ဖို့အလားအလာကုထုံးအခွင့်အလမ်းအကြံပြု အမှတ်တရများ။
ဗဟိုနျူကလိယ amygdala (CeA)
အဆိုပါ CeA အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးလူတန်းစားအပြုသဘောအားကောင်းနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အီသနောဆုတ်ခွာ (Baldwin et al နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်ဘို့ locus အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , 1991; Heinrich et al ။ , 1992, 1995; Koob နှင့် Le Moal, 1997, 2001; Zorrilla et al ။ , 2001) ။ အဆိုပါ CeA လည်းအီသနောမူးယစ် (Hyytia နှင့် Koob နှင့်ဆက်စပ်အများအပြားအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနောက်ပြန်ဆုတ်များအတွက်အရေးပါ locus အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး, 1995).
အဆိုပါ CeA များတွင်အများဆုံးအာရုံခံ GABAergic (Sun ကနှင့် Cassell ဖြစ်ကြောင်း, 1993), နှင့် CRF အလွန်အမင်း GABAergic အာရုံခံ (Veinante et al နှင့်အတူပူးတွဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။ , 1997; နေ့ et al ။ , 1999) ။ အဆိုပါ CeA ဖောဖောသီသီ CRF, CRF-R1 နှင့် CRF-BP (Sakanaka et al ဖော်ပြ။ , 1986; အိုးထိန်းသမား et al ။ , 1992; ဗန် Pett et al ။ , 2000) ။ ထို့အပြင် CeA အတွက် CRF နှင့်အီသနော၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုဂါဘမြို့သားဖြန့်ချိ (Nie et al တိုးမြှင့်ပြသလျက်ရှိသည်။ , 2004) နှင့် CRF လွှတ်ပေးရန်ပမာဏကိုအီသနောမှီခို (Merlo Pich et al ၏ preclinical မော်ဒယ်များအတွက်တိုးပွါး။ , 1995) ။ ပရိုတိန်း kinase ကို C Epsilon (PKCε) CRF-R1 အဆိုပါ CeA (Choi et al အတွက်အချက်ပြ modulate ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , 2002) နှင့်PKCε (PKCε KO ကြွက်) ၏ဖျက်မှုနှင့်အတူ Transgene ကြွက် Hodge et al (လျော့ချစိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူပြသကြ။ , 2002) ။ Electrophysiological လေ့လာမှုများ amygdala အတွက်အီသနော-သွေးဆောင်လွှတ်ပေးရန်ဂါဘမြို့သား CRF-R1 (Nie et al နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းပြသကြ။ , 2004) နှင့်ကြောင်းအီသနော-နှိုးဆွ vesicular ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန် Bajo et al (PKCεမော်ဒယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ , 2008) ။ အဆိုပါ CeA အတွက်လမ်းကြောင်းအချက်ပြPKCε CRF-R1 activation အားဖြင့်အီသနော activated နှင့်များ၏ anxiogenic သက်ရောက်မှု (Smith က et al အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ GABAergic neurotransmission modulates ဖြစ်ပါတယ်။ , 1998; Timpl et al ။ , 1998) ။ အဆိုပါ CeA အတွက် GABAergic neurotransmission modulates ကြောင်းအီသနော, CRF နှင့်PKCεအကြားဒါဟာ functional ဖြစ်စေ link ကိုအီသနောစားသုံးမှုနှင့်အီသနောဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်များ၏စူးရှသောအပြုသဘောအားကောင်းထိန်းညှိကြောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ dysregulation အထောက်အကူပြုပေမည်။
ဒါဟာအနိမ့် / အလယ်အလတ်အီသနော-ထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ (မူးရူးကဲ့သို့အီသနောစားသုံးမှု) နှင့်အီသနော-မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များ (နာတာရှည်ကဲ့သို့အီသနောထိတွေ့မှု) တွင် CRF သက်ရောက်မှုအကြားအရေးပါသောကွာခြားချက်ရှိကွောငျးကိုပြသထားသည်။ မူးရူးကဲ့သို့အီသနော (Lowery-Gionta et al နေစဉ်။ , 2012) က၎င်း၏ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့နိုင်မည်အကြောင်းအရာ CRF စနစ်၏ယာယီအထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းဖြစ်ပေါ်စေ homeostatic ပြည်နယ်အဆိုပါနာတာရှည်ကဲ့သို့အီသနောထိတွေ့မှု (ရောဘတ် et al ။ , 2003, 2004) ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမည်ဟုသော CRF neuroadaptation တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်နိုင်သည် allostatic ပြည်နယ်။ တစ်ဦး allostatic ပြည်နယ် သူတို့ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အနေဖြင့်စည်းမျဉ်းကွန်ယက်နှင့် "သိသာတည်ငြိမ်ရေး" (Koob နှင့် Le Moal တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ set ကို point ရဲ့တည်ထောင်ခြင်း၏နာတာရှည်သှဖေတစ်ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်, 2001) ။ T ကဆုလာဘ် set ကိုအမှတ်သူ၏နာတာရှည်သွေဖည်ပြင်းထန်စွာမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာကာလအတွင်းပြောင်းလဲနေသည်နှင့်အစွဲနှင့် relapses မှအားနည်းချက်ထုတ်လုပ်နောက်ဆက်တွဲ neuroadaptation (Koob နှင့် Le Moal မှအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည် 2001). acute စိတ်ဖိစီးမှုဟာ CeA (Herringa et al အတွက် CRF စနစ်၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကို၏ mRNA စကားရပ်တိုးမြှင့်မထားဘူး။ , 2004), သို့သော်အတွက် အီသနောနှင့်ထိတွေ့တိရစ္ဆာန်များ၏ CeA, CRF mRNA အတွက်သိသိသာသာတိုးရှိခဲ့ စကားရပ် (အယ်လ် et မရှိခြင်း။ , 2005) အဖြစ်ဆုတ်ခွာ (Sommer et al စဉ်အတွင်းအီသနော-မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက်။ , 2008).
အစောပိုင်းအရက်သောက်ဖြစ်စဉ်များအတွင်း CeA အတွက် CRF ၏စုဆောင်းမှု, မှီခိုမတိုင်မီနောက်ထပ်အီသနောထိတွေ့မှု (Lowery-Gionta et al ပိုမိုပြင်းထန်သောဖြစ်လာစေခြင်းငှါစနစ်အတွက် neuroplastic အပြောင်းအလဲများအစပျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ , 2012) ။ ဒါဟာ CRF-မှီခိုအပြောင်းအလဲမူးရူး-သောက်သုံးမှီခို (Lowery-Gionta et al အီသနောရန်ကနေအကူးအပြောင်းကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်းအဆိုပြုပြီးပါပြီ။ , 2012) ။ စာရေးသူလည်းအီသနောမူးရူးစားသုံးမှုဟာ CRF-mediated GABAergic ဂီယာ (Lowery-Gionta et al အီသနော blunts နေစဉ်, အီသနောရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အကျူးနဲ့ post-Synaptic က်ဘ်ဆိုက်များနှစ်ခုလုံးမှာ amygdala အတွက် GABAergic ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ , 2012) ။ ဒီလေ့လာမှုကအရက်သောက် CRF GABAergic ဂီယာအပေါ်ရှိပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလျှော့ချကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, အခြားသူများအီသနောပေါ်မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက် CeA (ရောဘတ် et al အတွက်တိုးမြှင့် GABAergic ဂီယာပြတွေ့ပြီ။ , 2004).
CRF နှင့် norepinephrine ဂါဘမြို့သားဖြင့်တိုင်းတာ GABAergic လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ပြသပြီA အဆိုပါ CeA ကနေတပြင်လုံးကို-ဆဲလ်မှတ်တမ်းတင်အတွက် inhibitory postsynaptic အလားအလာ (IPSCs) ။ ဒီအကြိုးသကျရော Nie et al (CRF-R1 ရန်ပိတ်ဆို့နှင့် CRF-R1 နောက်ကောက်ကြွက်များတွင်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါတယ်။ , 2004; Kash နှင့် Winder, 2006) ။ မှီခိုတိရိစ္ဆာန်များအတွက် CeA အတွက်အီသနောထုတ်လုပ်အဆိုပါလုပ်ခဲ့ပြီးဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်နှစ်ဦးစလုံး electrophysiological အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ Vivo အတွက် microdialysis စမ်းသပ်ချက် (ရောဘတ် et al ။ , 2003) ။ အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်နောက်ပိုင်းလေ့လာမှုများ CeA အတွက် GABAergic ဂီယာအပေါ် CRF-အရက်အပြန်အလှန်ပိုပြီးအရက်မှီခို (ရောဘတ် et al စဉ်အတွင်းအသံထွက်ကြောင်း corroborated ။ , 2004).
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ Synaptic ထိရောက်မှုအတွက်မြဲပြောင်းလဲမှုများကိုအခြေခံကြောင်းမျိုးစုံယန္တရားများအကျဉ်းချုပ်ထားသည်။ ငါt ကိုပု CRF စနစ်ကသိသိသာသာအရှင်မူးယစ်ဆေးစွဲ၏မော်လီကျူးအခြေခံမှအထောက်အကူပြုဂါဘမြို့သား-mediated တားစီး၏အချိုမှု-mediated စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်လျှော့ချရေး၏တိုးမြှင့်ရရှိလာတဲ့နှင့်တကွ, VTA နှင့် amygdala အတွက် plasticity ၏ induction နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကွောငျးထငျရှားဖြစ်ပါတယ်။
အီသနောမှီခိုနေတဲ့သမိုင်းကိုအောက်ပါဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry အတွက် Neuroplasticity (Hansson et al ပြသလျက်ရှိသည်။ , 2008) ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွက်ရုပ်ပြစမ်းသပ် data တွေကိုစိတ်ဖိစီးမှုဟာ VTA နှင့် amygdala အရေးပါအတွင်း plasticity induces နှင့်ကျင်းပေါင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မယ့်နာတာရှည်စိုးရိမ်စိတ်ပြည်နယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါ၎င်းယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ အဆိုပါ limbic အာရုံခံကွန်ယက်တွင်ဤပြောင်းလဲမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ၎င်းခလုတ်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ စွဲလမ်းစေမူးယစ်ဆေးဝါးများအပြုအမူာင်းသွေးဆောင်ပြခဲ့ကြခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတန်ဖိုးစာပေ၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိ။ အရက်စွဲအတွက်ရေရှည် neuroadaptation ၏လေ့လာရေးဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုကြောက်စနစ်များကို activated ဖြစ်လာကြောင်းပြသကြ (Heilig et al ။ , 2010); ဇမည်သို့ပင်ဆိုစေ CRF စနစ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါး၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ထုတ်ရမည့်အရာများစွာရှိနေသေးသည်။။ အများအပြားကသွေးသည်ဦးနှောက်အတားအဆီး-မထိုးဖောက် CRF-R1 ရန်အချို့သောဒြပ်ပေါင်းများကိုအရက် (Gehlert et al ဆက်ဆံဖို့တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ထိရောက်မှုကိုပြသကြပါပြီသို့သော်နေစဉ်, တီထွင်ခဲ့ကြ။ , 2007, 2012), CRF-R1 ရန်နေဆဲလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ (Koob နှင့် Zorrilla အတွက်အောင်မြင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်, 2012).
အများအပြား psychoactive တ္ထုများ (အရက်, နီကိုတင်း, ဖိန်းဓာတ်နှင့်ဆေးညွှန်းဆေး) ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကိုလက်ခံကြသည်အတိုင်းအလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများအားလုံးကိုထိတွေ့မှုကာကွယ်ခြင်း, မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ FDA ကလက္ခဏာလျှော့ချရေး (disulfuram, naltrexone), ဆုတ်ခွာ (benzodiazepines, valporic အက်ဆစ်, varenicline) နဲ့အကူအညီများနှင့် relapse ကာကွယ်တားဆီးရေး (acamprosate, ondansetron များ၏ကုသမှုကိုအာရုံစိုက်ကြောင်းအရက်မှီခိုဘို့အတည်ပြုသို့မဟုတ်ပိတ်-တံဆိပ်အသုံးပြုကြသည်များစွာကိုဆေးဝါးများရှိပါတယ်, baclofen, topiramate, varenicline, methadone) နှင့် FDA ကအခြားအရိပ်လက္ခဏာများအတွက်ဆေးဝါးများအတည်ပြုအခြားသူတွေ Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်း et al (ထို preclinical ဇာတ်စင် (mifepristone) မှာရှိပါတယ်။ , 2011), သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် recidivism နေဆဲကျင်းပေါင်းတို့အတွက်အဓိကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ အလွဲသုံးမှုများဝတ္ထုများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတန်းအရေးယူမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောယန္တယားရှိပေမယ့်, ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဟာ HPA ဝင်ရိုး၏ဆွဖို့ဦးဆောင်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ရုတ်တရက်ရပ်နားခြင်း CRF ၏ activation တိုးပွားစေပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု modulate ကြောင်းဆေးကျင်းပေါင်းများအတွက်ဝတ္ထု pharmacotherapeutic ချဉ်းကပ်ပူဇော်စေနိုင်သည်။ အဆိုပါ CRF system ပေါ်တွင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုရလဒ်များထိန်းညှိကုထုံး Synaptic transmission ကိုအတွက် CRF ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့ရန်ညွှန်ကြားထားသည်ဟုဝတ္ထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပူဇော်စေနိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးရှာဖြေလျော့ခြင်းအားဖြင့်, က relapse လျှော့ချနည်း deleterious အပြုအမူအကျိုးဆက်များနှင့်အတူအမှတ်တရများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် ဒီအလုပ်ကို UCSF မှတစ်ဆင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဆေးဝါးသုတေသနမှ UCSF မှကျန်းမာရေးအင်စတီကျု - စီလီနာအီးမှဘတ်ဂျက်မှထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည် - 1R21DA029966-01 နှင့် NIH Fast Track ဆုကို MLSMR စုဆောင်းမှုကို Selena E. Bartlett သို့ပြသရန်ဖြစ်သည် , UCSF ဆေးဝါးကျောင်း (မဟာဌာနမှူးနှင့်လက်တွေ့ဆေးဝါး) နှင့်ဆေးကျောင်း (လက်တွေ့ဆေးဝါးဗေဒနှင့်စမ်းသပ်ကုသမှု) သည် Carolina L. Haass-Koffler သို့။
အဒေါ့ဖ် R. , Tranel ဃ, Damasio အိပ်ချ်, Damasio အေ (1994) ။ လူ့ amygdala ဖို့နှစ်နိုင်ငံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအောက်ပါမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ချို့ယွင်းအသိအမှတ်ပြုမှု. သဘာဝ 372, 669-672 ။ Doi: 10.1038 / 372669a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ambrosio အီး, ရှပ်ကို LG, Pilotte NS (1997) ။ ဒေသဆိုင်ရာနာတာရှည်ကိုကင်းနှင့်အကင်းဆုတ်ခွာထိတွေ့ကြွက်၏ဦးနှောက်ထဲမှာအချက် receptors လွှတ် corticotropin မှ binding. synapses 25, 272–276. doi: 10.1002/(SICI)1098-2396(199703)25:3<272::AID-SYN6>3.0.CO;2-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Arborelius L. , Owen MJ, Plotsky pm တွင်, Nemeroff သမဝါယမ (1999) ။ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်အတွက် corticotropin-releasing အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ. ဂျေ Endocrinol. 160, 1-12 ။ Doi: 10.1677 / joe.0.1600001 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bajo အမ်, Cruz MT, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ရှုပ်ထွေး R. , ရောဘတ်အမ် (2008) ။ CRF- ၏ပရိုတိန်း kinase ကို C Epsilon ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်ဗဟို amygdala အတွက်အီသနော-သွေးဆောင်ဂါဘမြို့သားဖြန့်ချိ. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 105, 8410-8415 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0802302105 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Baldwin HA, Rassnick အက်စ်, Rivier ဂျေ, Koob gf, Britton KT (1991) ။ CRF ရန်ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာရန် "anxiogenic" တုန့်ပြန်နောက်ကြောင်းပြန်. Psychopharmacology (Berl ။ ) 103, 227-232 ။ [PubMed]
ဘေးလ် TL, Contarino အေ, စမစ် GW, ချမ်း R. , ရွှေ LH, Sawchenko PE, Koob gf, ခြိုငျ့ WW, Lee က KF (2000) ။ corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor-2 display ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်လစ်လပ်ကြွက်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှ hypersensitive များမှာ. နတ်။ မျိုးရိုးဗီဇ. 24, 410-414 ။ Doi: 10.1038 / 74263 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘေးလ် TL, Lee က KF, ခြိုငျ့ WW (2002) ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောကအတွက် corticotropin-releasing အချက် receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကို. Integrated ။ comp ။ Biol. 42, 552-555 ။ Doi: 10.1093 / icb / 42.3.552 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘေးလ် TL, ခြိုငျ့ WW (2004) ။ CRF နှင့် CRF receptors: စိတ်ဖိစီးမှု Response အတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အခြားအပြုအမူတွေ. Annu ။ ဗျာ Pharmacol ။ Toxicol. 44, 525-557 ။ Doi: 10.1146 / annurev.pharmtox.44.101802.121410 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Beckstead MJ, Gantz SC, Ford ကားက CP, Stenzel-ညံ့ဖျင်းအမတ်, Phillips က PE, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Williams က JT (2009) ။ dopamine အာရုံခံအတွက် GIRK ရုပ်သံလိုင်း-mediated ဂီယာ၏ CRF တိုးမြှင့်. Neuropsychopharmacology 34, 1926-1935 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.25 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Behan DP, De Souza eb, လောရီ PJ, Potter အီး, Sawchenko P. , ခြိုငျ့ WW (1995a) ။ CRF တစ်ဝတ္ထုစည်းမျဉ်းများနှင့်ဆက်စပ် peptides: အချက် (CRF) စည်းနှောင်ပရိုတိန်းဖြန့်ချိ Corticotropin. တပ်ဦး။ Neuroendocrinol. 16: 362-382 ။ Doi: 10.1006 / frne.1995.1013 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Behan DP, Maciejewski ဃ, Chalmers ဃ, De Souza eb (1995b) ။ ပရိုတိန်း (CRF-BP) binding Corticotropin လွှတ်အချက်အာရုံခံခြင်းနှင့် astrocytic ဆဲလ်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်. ဦးနှောက် Res. 698, 259–264. doi: 10.1016/0006-8993(95)01014-M. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE (1998) ။ hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗြာ. 28, 309–369. doi: 10.1016/S0165-0173(98)00019-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bjork K. , Hansson AC အ, Sommer WH (2010) ။ ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရက်ဂယက်၏ကြွက်မော်ဒယ်များအတွက်မျိုးဗီဇမူကွဲနှင့်ဦးနှောက်မျိုးဗီဇစကားရပ်. int ။ ဗျာ Neurobiol. 91, 129–171. doi: 10.1016/S0074-7742(10)91005-2. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Blanco Eh, Zuniga JP, Andres ME, Alvarez ကို AR, Gysling K. (2011) ။ Corticotropin-releasing အချက် binding ပရိုတိန်း neuroendocrine ဆဲလ်များနှင့် cortical အာရုံခံအတွက်စညျးမဉျြးစညျးကမျးအတွင်းသို့လမ်းကြောင်းထဲသို့ဝင်. Neuropeptides 45, 273-279 ။ Doi: 10.1016 / j.npep.2011.05.002 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bonci အေ, Borgland အက်စ် (2009) ။ အဆိုပါ mesolimbic စနစ်မူးယစ်ဆေး-မှီခို Synaptic plasticity ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် orexin / hypocretin နှင့် CRF ၏အခန်းက္ပ. Neuropharmacology 56 (ပျော့ပျောင်း။ 1), 107-111 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2008.07.024 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bonci အေ, Malenka RC (1999) ။ Properties ကိုနှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopaminergic နှင့် GABAergic ဆဲလ်အပေါ် excitatory synapses ၏ plasticity. ဂျေ neuroscience. 19, 3723-3730 ။ [PubMed]
Borgland SL, Ungless MA, Bonci အေ (2010) ။ dopamine အာရုံခံအပေါ် orexin / hypocretin နှင့် CRF တစ် convergence လုပ်ရပ်များ: စွဲအတွက်ထွန်းသစ်စကစားသမားတွေ. ဦးနှောက် Res. 1314, 139-144 ။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2009.10.068 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Britton DR, Koob gf, Rivier ဂျေ, ခြိုငျ့ဒဗလျူ (1982) ။ Intraventricular corticotropin-releasing အချက်အသစ်အဆန်း၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများတိုးမြှင့်. ဘဝကသိပ္ပံ. 31, 363-367 ။ [PubMed]
Buczek Y. , Le အေဒီ, ဝမ်အေ, Stewart ကဂျေ, Shaham Y. (1999) ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြွက်များတွင်ရှာကြံ sucrose ဖြေရှင်းချက်ရှာကြံသော်လည်းမနီကိုတင်း reinstates. Psychopharmacology (Berl ။ ) 144, 183-188 ။ Doi: 10.1007 / s002130050992 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘားနက်က JC ဂျူနီယာ (2005) ။ Urocortin: နှလုံးပျက်ကွက်၏ neurohumoral အယူအဆတိုးတက်. သှေးလှညျ့ခွငျး 112, 3544-3546 ။ Doi: 10.1161 / CIRCULATIONAHA.105.584441 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cador အမ်, ကိုးလ် BJ, Koob gf, Stinus L. , Le Moal အမ် (1993) ။ corticotropin လွှတ်အချက်ဗဟိုအုပ်ချုပ်မှု D-စိတ်ကြွဆေးမှရေရှည်ာင်း induces. ဦးနှောက် Res. 606, 181–186. doi: 10.1016/0006-8993(93)90982-S. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carboni အီး, Silvagni အေ, Rolando MT, Di Chiara G. အ (2000) ။ ၏ stimulation Vivo အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြည့်ခြင်းဖြင့် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် dopamine ဂီယာ. ဂျေ neuroscience. 20, RC102 ။ [PubMed]
Chang CP၊ Pearse RV၊ 2nd ။ , O'Connell S. , Rosenfeld MG (1993) ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်ထဲမှာ corticotropin-releasing အချက်နှင့် sauvagine တစ်ခုနစ်ခု transmembrane helix အဲဒီ receptor ၏ identification. အာရုံခံဆဲလျ 11, 1187–1195. doi: 10.1016/0896-6273(93)90230-O. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chen ကအေ, Zorrilla အီး, Smith ကအက်စ်, Rousso ဃ, Levy C. , Vaughan ဂျေ, Donaldson C. , ရောဘတ်အေ, Lee က KF, ခြိုငျ့ဒဗလျူ (2006) ။ Urocortin 2-လစ်လပ်ကြွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian hypothalamus-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူအတွက်ကျားမ-တိကျတဲ့ပြောင်းလဲပြ. ဂျေ neuroscience. 26, 5500-5510 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3955-05.2006 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chen က R. , Lewis က ka, Perrin MH, ခြိုငျ့ WW (1993) ။ လူသားတစ်ဦး corticotropin-releasing-Factor အဲဒီ receptor ၏ expression ကိုယ်ပွား. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 90, 8967-8971 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Choi DS, ဝမ်ဃ, Dadgar ဂျေ, Chang WS, ရှုပ်ထွေး ro (2002) ။ ပရိုတိန်း kinase ကို C Epsilon ၏ conditional ကယ်ဆယ်ရေးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်အီသနော preference ကိုနှင့်ညှို့ sensitivity ကိုထိန်းညှိ. ဂျေ neuroscience. 22, 9905-9911 ။ [PubMed]
ခရစ်ယာန်၎င်းကိုအလက်ဇန္ဒား NJ, Diaz MR, ရော်ဘင်ဆင်အက်စ်, McCool BA (2012) ။ နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအီသနောနှင့်ဆုတ်ခွာ differential basolateral amygdala AMPA-type အမျိုးအစားအချိုမှု receptor function ကိုနှင့်လူကုန်ကူးမှု modulate. Neuropharmacology 62, 2429-2438 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2012.02.017 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chu K. , Koob gf, ကိုးလ်အမ်, Zorrilla EP, Roberts သည် AJ (2007) ။ ကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်မှီခို-သွေးဆောင်တိုးအဆိုပါ CRF1 အဲဒီ receptor ရန် antalarmin အားဖြင့်၎င်း, CRF1 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်. Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ. 86, 813-821 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2007.03.009 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကိုးလ် BJ, Cador အမ်, Stinus L. , Rivier ဂျေ, ခြိုငျ့ဒဗလျူ, Koob gf, Le Moal အမ် (1990) ။ တစ်ဦး CRF ရန်လုပ်ကွက်၏ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြုအမူအကဲဆတ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်. ဦးနှောက် Res. 512, 343–346. doi: 10.1016/0006-8993(90)90646-S. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကုန်ကျစရိတ် SC, Kesterson RA, Heldwein Ka, Stevens SL ကြားအေဒီ, Holly JH, Murray SE, Hill က JK, ဘောင်းဘီ GA, Hohimer AR, Hatton, DC, Phillips ကတီဂျေ, ဖင်လန် DA, အနိမျ့ MJ, Rittenberg ကို MB, Stenzel P. , Stenzel -Poore အမတ် (2000) ။ corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor-2 ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ချို့ယွင်းနှလုံးသွေးကြော function ကိုမှပုံမှန်မဟုတ်သောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်. နတ်။ မျိုးရိုးဗီဇ. 24, 403-409 ။ Doi: 10.1038 / 74255 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဒါဝိဒ်သည် V. , Matifas အေ, Gavello-Baudy အက်စ်, Decorte L. , Kieffer BL, Cazala P. (2008) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၏ mu- သော်လည်းမမြစ်ဝကျွန်းပေါ်-opioid receptors ၏ activation အားဖြင့်ရူးနှမ်းဦးနှောက်ဒေသဆိုင်ရာ Fos စကားရပ်: opiate ဆုလာဘ်အတွက် ventral thalamus တစ်ခုဆိုလိုဘို့သက်သေအထောက်အထား. Neuropsychopharmacology 33, 1746-1759 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301529 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Davis က ll, Trivedi အမ်, Choate အေ, Kramer GL, အသေးသုံးငွေအက်ဖ် (1997) ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက် baclofen အဆိုပါ GABAB agonist မှကြီးထွားမှုဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု. Psychoneuroendocrinology 22, 129–140. doi: 10.1016/S0306-4530(96)00048-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Davis ကအမ် (1992a) ။ ကွောကျမကျ potentiated ထိတ်လန့်အတွက် amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍကို: စိုးရိမ်စိတ်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များများအတွက်ဂယက်ရိုက်. ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol ။ သိပ္ပံ. 13, 35-41 ။ [PubMed]
Davis ကအမ် (1992b) ။ ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက် amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍကို. Annu ။ ဗျာ neuroscience. 15, 353-375 ။ Doi: 10.1146 / annurev.ne.15.030192.002033 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Davis ကအမ်, ရှီ C. (2000) ။ အဆိုပါ amygdala. Curr ။ Biol. 10, R131. doi: 10.1016/S0960-9822(00)00345-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Davis ကအမ်, Whalen PJ (2001) ။ အဆိုပါ amygdala: သတိဝီရိယနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှု. Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 6, 13-34 ။ [PubMed]
နေ့ HE, Curran EJ, Watson ဟာ SJ, Jr. Akil အိပ်ချ် (1999) ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏ amygdala နှင့်အိပ်ရာနျူကလိယ၏ကြွက်အလယ်ပိုင်းနျူကလိယအတွက်ကွဲပြား neurochemical လူဦးရေ: Interleukin-1beta နေဖြင့်၎င်းတို့၏ရွေးချယ် activation အဘို့သက်သေအထောက်အထား. ဂျေ comp ။ Neurol. 413, 113–128. doi: 10.1002/(SICI)1096-9861(19991011)413:1<113::AID-CNE8>3.0.CO;2-B. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
de Souza eb (1995) ။ Corticotropin-releasing အချက် receptors: ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းဇီဝြဖစ်စဉ်, ဆေးဝါးဗေဒ, ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားရောဂါ. Psychoneuroendocrinology 20, 789–819. doi: 10.1016/0306-4530(95)00011-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဒိုင်ယာနာအမ် (2011) ။ အဆိုပါ dopamine မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အယူအဆနှင့်၎င်း၏အလားအလာကုထုံးတန်ဖိုးကို. တပ်ဦး။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 2:64။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2011.00064 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Eiler WJ, 2nd ။ , Seyoum R. , Foster KL, Mailey C. , ဇွန်လ HL (2003) ။ D1 dopamine အဲဒီ receptor အရက်- သာ. နှစ်သက် (P), ကြွက်များတွင် stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယထဲမှာအရက်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိ. synapses 48, 45-56 ။ Doi: 10.1002 / syn.10181 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Erb အက်စ်, Shaham Y. , Stewart ကဂျေ (1996) ။ စိတ်ဖိစီးမှုကြာရှည်သုဉ်းခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-အခမဲ့ကာလအတွင်းအပြီးကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ reinstates. Psychopharmacology (Berl ။ ) 128, 408-412 ။ Doi: 10.1007 / s002130050150 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Everitt BJ, ပါကင်ဂျာ Olmstead MC, အာရိုယိုအမ်, Robledo P. , Robbins TW (1999) ။ စွဲလမ်းနှင့်ဆုလာဘ်အတွက် Associative ဖြစ်စဉ်များ။ amygdala-ventral striatal subsystem ၏အခန်းကဏ္ဍကို. အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ. 877, 412-438 ။ Doi: 10.1111 / j.1749-6632.1999.tb09280.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Everitt BJ, Robbins TW (2005) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှ compulsion မှ. နတ်။ neuroscience. 8, 1481-1489 ။ Doi: 10.1038 / nn1579 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Feltenstein မဂ္ဂါဝပ်, ကြည့်ရှု RE (2008) ။ စွဲလမ်းမှု၏ neurocircuitry: ခြုံငုံသုံးသပ်. br ။ ဂျေ Pharmacol. 154, 261-274 ။ Doi: 10.1038 / bjp.2008.51 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fibiger HC (1978) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အားဖြည့်ယန္တရားများ: အ catecholamines သီအိုရီ၏အရေးပါသောသုံးသပ်ချက်ကို. Annu ။ ဗျာ Pharmacol ။ Toxicol. 18, 37-56 ။ Doi: 10.1146 / annurev.pa.18.040178.000345 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Francesconi ဒဗလျူ, Berton F. , Repunte-Canonigo V. , Hagihara K. , Thurbon D. , Lekic D. , Specio SE, Greenwell TN, Chen SA, Rice KC, Richardson HN, O'Dell LE, Zorrilla EP, Morales အမ်, Koob GF, Sanna PP (2009) ။ အလွဲသုံးစားမှုအရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးထံမှအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဆုတ်ခွာသည့် stria terminalis ၏ juxtacapsular အိပ်ရာနျူကလိယအတွက်အခ်ါစိတ်လှုပ်ရှား၏ရေရှည်အလားအလာချို့ယွင်း. ဂျေ neuroscience. 29, 5389-5401 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5129-08.2009 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Frye GD, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း (1982) ။ အီသနော-သွေးဆောင်မော်တာချွတ်ယွင်း၏ GABAergic မော်ဂျူ. ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther. 223, 750-756 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဖူ Y. , Pollandt အက်စ်, လျူဂျေ, Krishnan ခ, Genzer K. , Orozco-Cabal L. , Gallagher JP, Shinnick-Gallagher P. (2007) ။ ဗဟို amygdala (CeA) တွင်ရေရှည်အလားအလာ (LTP) နာတာရှည်ကိုကင်းကနေအချိန်ကြာမြင့်စွာဆုတ်ခွာပြီးနောက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် CRF1 receptors လိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်. ဂျေ Neurophysiol. 97, 937-941 ။ Doi: 10.1152 / jn.00349.2006 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fudge JL, Emiliano AB (2003) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala နှင့် dopamine system ကို: အ dopamine ပဟေဠိ၏အခြားအပိုင်းအစ. ဂျေ Neuropsychiatry Clin ။ neuroscience. 15, 306-316 ။ Doi: 10.1176 / appi.neuropsych.15.3.306 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
funk CK, Zorrilla EP, Lee က MJ, ဆန် KC, Koob gf (2007) ။ Corticotropin-releasing အချက် 1 ရန်ရွေးချယ်အီသနော-မှီခိုကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးကိုလျော့ချ. Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 61, 78-86 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2006.03.063 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
funk ဃလီ Z. , Le အေဒီ (2006) ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာက c-fos နှင့် corticotropin-releasing အချက် mRNA အပေါ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် pharmacological ဖိအားသက်ရောက်မှု: အရက်ရှာ၏ reinstatement မှကြားဆက်ဆံရေး. neuroscience 138, 235-243 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2005.10.062 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဓာတ်ငွေ့ JT, သံလွင် MF (2007) ။ Wistar ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါအီသနော-ရှာကြံအပြုအမူ၏ Reinstatement. အရက်။ Clin ။ Exp ။ res. 31, 1441-1445 ။ Doi: 10.1111 / j.1530-0277.2007.00480.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gatto GJ, McBride WJ, မာဖီ JM, Lumeng အယ်လ်လီ TK (1994) ။ အရက်- သာ. နှစ်သက်ကြွက်များအားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာသို့အီသနော Self-ပြုတ်ရည်. အရက် 11, 557–564. doi: 10.1016/0741-8329(94)90083-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gawin FH, Kleber HD ကို (1986) ။ ကိုကင်းချိုးဖောက် Abstinence symptomatology နှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါ။ လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်. Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 43, 107-113 ။ [PubMed]
Gehlert DR, Cippitelli အေ, Thorsell အေ, Le အေဒီ, Hipskind PA ဆိုပြီး, Hamdouchi C. , Lu ကဂျေ, Hembre EJ, Cramer ဂျေ, သီချင်းအမ်, McKinzie ဃ, Morin အမ်, Ciccocioppo R. , Heilig M က ။ (2007) ။ 3- (4-Chloro-2-morpholin-4-yl-thiazol-5-yl) -8- (1-ethylpropyl) -2, 6-Dime thyl-imidazo [1, 2-ခ] pyridazine: တစ်ဝတ္ထုဦးနှောက် အရက်၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ထိရောက်မှုနှင့်အတူ -penetrant, နှုတ်မရရှိနိုင် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor 1 ရန်. ဂျေ neuroscience. 27, 2718-2726 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4985-06.2007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gehlert DR, Cramer ဂျေ, Morin သည် SM (2012) ။ ကြွက်များ၏ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအပေါ် corticotropin-releasing အချက် 1 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ. ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther. 341, 672-680 ။ Doi: 10.1124 / jpet.111.189753 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျော့ခ်ျအို, က Le Moal အမ်, Koob gf (2011) ။ Allostasis နှင့်စွဲ: အ dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် corticotropin-releasing အချက်စနစ်များ. Physiol ။ ပြုမူ. 106, 58-64 ။ Doi: 10.1016 / j.physbeh.2011.11.004 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဇော့အက်ဖ်, Aston-Jones ဟာဂျီ (2001) ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအားဖြင့် midbrain dopamine အာရုံခံ၏အစွမ်းထက်စည်းမျဉ်း. ဂျေ neuroscience. 21, RC160 ။ [PubMed]
ဇော့အက်ဖ်, Aston-Jones ဟာဂျီ (2002) ။ အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအားဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာဆဲလ် activation: midbrain dopamine အာရုံခံတစ်ဝတ္ထု excitatory အမိုင်နိုအက်ဆစ် input ကို. ဂျေ neuroscience. 22, 5173-5187 ။ [PubMed]
Ghitza UE, Grey က SM, Epstein DH, ဆန် KC, Shaham Y. (2006) ။ CRF1 receptors တစ်အခန်းကဏ္ဍ: အဆိုပါ anxiogenic မူးယစ်ဆေး yohimbine တစ်ဦးကြွက် relapse မော်ဒယ်အတွက်ရှာကြံအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ reinstates. Neuropsychopharmacology 31, 2188-2196 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1300964 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Goeders NE, Guerin gf (1994) ။ non-ဆက်ပြောပါတယ်လျှပ်စစ် footshock ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်. Psychopharmacology (Berl ။ ) 114, 63-70 ။ [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း CR, Perrin MH, DiGruccio MR, Miller က CL, Rivier je, ခြိုငျ့ WW, Riek R. (2004) ။ NMR ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အမျိုးအစား B1, G ပရိုတိန်း-coupled receptor ၏ပထမဦးဆုံး extracellular ဒိုမိန်း၏ peptide ဟော်မုန်းစည်းနှောင် site ကို. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 101, 12836-12841 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0404702101 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း CR, Perrin MH, Gulyas ဂျေ, Digruccio MR, Cantle JP, Rivier je, ခြိုငျ့ WW, Riek R. (2007) ။ တစ်ဦး peptide ligand နှင့်အတူရှုပ်ထွေးနေတဲ့ type ကို B1, G ပရိုတိန်း-coupled receptor ၏ N-terminal ကိုဒိုမိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 104, 4858-4863 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0700682104 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Guillemin R. , Rosenberg ကခ (1955) ။ anterior pituitary ၏ဟာသ hypothalamic ထိန်းချုပ်မှု: ပေါင်းစပ်တစ်ရှူးယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူလေ့လာမှုတစ်ခု. ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 57, 599-607 ။ Doi: 10.1210 / endo-57-5-599 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hahn ဂျေ, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Bonci အေ (2009) ။ နာတာရှည်ကင်း ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံအတွက် excitatory ဂီယာ၏ corticotropin-releasing အချက်-မှီခိုအလားအလာပိုကောင်းစေပါတယ်. ဂျေ neuroscience. 29, 6535-6544 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4773-08.2009 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hansson AC အ, Cippitelli အေ, Sommer WH, Ciccocioppo R. , Heilig အမ် (2007) ။ တိုင်းဒေသကြီး-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ချ-စည်းမျဉ်းအရက်- သာ. နှစ်သက် msP ကြွက်များတွင် Crhr1 ဗီဇစကားရပ်၏အရက်ဖို့ကြော်ငြာ lib access ကိုအောက်ပါ. စှဲလမျးသူ။ Biol. 12, 30-34 ။ Doi: 10.1111 / j.1369-1600.2007.00050.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hansson AC အ, Cippitelli အေ, Sommer WH, fede အေ, Bjork K. , Soverchia L. , Terasmaa အေ, Massi အမ်, Heilig အမ်, Ciccocioppo R. (2006) ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိတ်ဖိစီးမှုများကသွေးဆောင်ရှာကြံအရက်သေစာသို့ပြန်သွားကြသည်ဖို့ကြွက် Crhr1 locus နှင့် sensitivity ကိုမှာအပြောင်းအလဲ. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 103, 15236-15241 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0604419103 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hansson AC အ, Rimondini R. , Neznanova O. , Sommer WH, Heilig အမ် (2008) ။ အီသနောမှီခိုနေတဲ့သမိုင်းကိုအောက်ပါဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry အတွက် Neuroplasticity. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 27, 1912-1922 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2008.06159.x ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Heilig အမ်, Koob gf (2007) ။ အရက်မှီခိုအတွက် corticotropin-releasing အချက်အဘို့အဓိကအခန်းကဏ္ဍ. ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience. 30, 399-406 ။ Doi: 10.1016 / j.tins.2007.06.006 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Heilig အမ်, Thorsell အေ, Sommer WH, Hansson AC အ, Ramchandani VA သို့, ဂျော့ခ်ျ၎င်းကို, Hommer ဃ, ဘား CS (2010) ။ လက်တွေ့ကုသမှုသို့အရက်၏ neuroscience ဘာသာပြန်ဆို: အဘက်ဇ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကနေဘလူးကုသနိုင်ရန်. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 35, 334-344 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2009.11.018 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Heimer L. , Alheid gf (1991) ။ Basal forebrain ခန္ဓာဗေဒ၏ပဟေဠိအတူတကွ Piecing. Adv ။ Exp ။ Med ။ Biol. 295, 1-42 ။ [PubMed]
Heinrich SC, Menzaghi အက်ဖ်, Schulteis G. အ, Koob gf, Stinus L. (1995) ။ အဆိုပါ amygdala အတွက် corticotropin-releasing အချက်များ၏ဖိနှိပ်မှုမော်ဖင်းအကိုက်ဆုတ်ခွာ၏ဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များ attenuates. ပြုမူနေ။ Pharmacol. 6, 74-80 ။ [PubMed]
Heinrich SC, Pich EM, Miczek Ka, Britton KT, Koob gf (1992) ။ Corticotropin-releasing အချက်ရန်တိုက်ရိုက် neurotropic အရေးယူမှုကနေတဆင့်လူမှုရေးအရရှုံးနိမ့်ကြွက်များတွင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလျော့နည်းစေ. ဦးနှောက် Res. 581, 190–197. doi: 10.1016/0006-8993(92)90708-H. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Herringa RJ, နန္ဒလုပ် SA, Hsu ၎င်းကို, Roseboom PH သည်, Kalin နယူးဟမ်းရှား (2004) ။ အလယ်ပိုင်းနှင့် basolateral amygdala CRF-binding ပရိုတိန်းမျိုးဗီဇစကားရပ်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်စူးရှသောကဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများ. ဦးနှောက် Res ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res. 131, 17-25 ။ Doi: 10.1016 / j.molbrainres.2004.08.005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပြုခဲ့ SR (2005) ။ Class B မှာ G-ပရိုတိန်း-coupled receptors မှ binding peptide နှင့် nonpeptide ligand ၏ mechanisms. မူးယစ်ဆေး Discover ။ ယနေ့တွင် 10, 417–427. doi: 10.1016/S1359-6446(05)03370-2. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hodge CW, Raber ဂျေ, McMahon တီ, Walter ဟာအိပ်ချ်, Sanchez-ဖာရက်နံနက်, သံလွင် MF, Mehmert K. , နက်ဖြန် AL, ရှုပ်ထွေး ro (2002) ။ ပရိုတိန်း kinase Cepsilon ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများနှင့် neurosteroid supersensitivity လျှော့ချ, စိုးရိမ်ပူပန်ကဲ့သို့သောအပြုအမူလျော့နည်းသွား. ဂျေ Clin ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ. 110, 1003-1010 ။ Doi: 10.1172 / JCI15903 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hsu SY, Hsueh AJ (2001) ။ လူ့ stresscopin နှင့် stresscopin-related peptide အမျိုးအစား2corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor များအတွက်ရွေးချယ် ligands များမှာ. နတ်။ Med. 7, 605-611 ။ Doi: 10.1038 / 87936 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hubbard ၎င်းကို, Nakashima BR, Lee ကဗြဲ, Takahashi LK (2007) ။ basolateral amygdala corticotropin-releasing အချက် 1 receptors ၏ activation Contextual ကွောကျရှံ့ခွငျး၏စုစည်းပြီး modulates. neuroscience 150, 818-828 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2007.10.001 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hyytia P. , Koob gf (1995) ။ အဆိုပါတိုးချဲ့ amygdala အတွက်ဂိဗာမွို့အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြွက်များတွင်အီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေ. အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol. 283, 151-159 ။ [PubMed]
Jochman Ka, Newman က SM, Kalin နယူးဟမ်းရှား, Bakshi VP (2005) ။ အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက် Corticotropin-releasing အချက်-1 receptors စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် anorexia ဖျန်ဖြေ. ပြုမူနေ။ neuroscience. 119, 1448-1458 ။ Doi: 10.1037 / 0735-7044.119.6.1448 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
တရားမျှတရေး NJ, ယွမ် ZF, Sawchenko PE, ခြိုငျ့ဒဗလျူ (2008) ။ BAC Transgene ကြွက်အစီရင်ခံ 1 corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor စကားရပ်ရိုက်ပါ: ဗဟို corticotropin-releasing အချက်စနစ်ပွနျလညျသငျ့ ligand-receptor မတိုက်ဆိုင်ဘို့ဂယက်ရိုက်. ဂျေ comp ။ Neurol. 511, 479-496 ။ Doi: 10.1002 / cne.21848 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Karolyi IJ, Burrow HL, Ramesh TM, Nakajima အမ်, Lesh JS, Seong အီး, Camper လုပ် SA, Seasholtz AF (1999) ။ corticotropin-releasing ဟော်မုန်း-binding ပရိုတိန်း-လစ်လပ်ကြွက်များတွင်ပြောင်းလဲစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်အလေးချိန်အမြတ်. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 96, 11595-11600 ။ Doi: 10.1073 / pnas.96.20.11595 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kash TL, Nobis WP, Matthews က RT ကို, Winder DG (2008) ။ Dopamine ဟာ CRF-R1-မှီခိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်တိုးချဲ့ amygdala အတွက်အစာရှောင်ခြင်း excitatory Synaptic ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်. ဂျေ neuroscience. 28, 13856-13865 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.4715-08.2008 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kash TL, Winder DG (2006) ။ Neuropeptide Y နှင့် bi-directionally corticotropin-releasing အချက်အဆိုပါ stria terminalis ၏အိပ်ရာနျူကလိယအတွက် inhibitory Synaptic ဂီယာ modulate. Neuropharmacology 51, 1013-1022 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2006.06.011 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kemp CF, ဝုဒ် RJ, လောရီ PJ (1998) ။ အဆိုပါ corticotrophin-releasing အချက်-binding ပရိုတိန်း: အများအပြားအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုလုပ်ရပ်. Peptides 19, 1119–1128. doi: 10.1016/S0196-9781(98)00057-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kimura Y. , Takahashi K. , Totsune K. , Muramatsu Y. , Kaneko C. , တောမြိုးစေ့အေဒီ, ဆူဇူကီးတီ, Ebina အမ်, Nukiwa တီ, Sasano အိပ်ချ် (2002) ။ လူ့နှလုံးထဲမှာ urocortin နှင့် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor Subtype ၏ expression. ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab. 87, 340-346 ။ Doi: 10.1210 / jc.87.1.340 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kishimoto တီ, Radulovic ဂျေ, Radulovic အမ်, လင်း CR, Schrick C. , Hooshmand အက်ဖ်, Hermanson O. , Rosenfeld MG, Spiess ဂျေ (2000) ။ crhr2 ၏ပယ်ဖျက်ခြင်း corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor-2 တစ်ခု anxiolytic အခန်းကဏ္ဍမှထုတ်ဖော်ပြသ. နတ်။ မျိုးရိုးဗီဇ. 24, 415-419 ။ Doi: 10.1038 / 74271 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob G. အ, Kreek MJ (2007) ။ စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ dysregulation နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း. နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 164, 1149-1159 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.2007.05030503 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf (1992) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး: ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ခန္ဓာဗေဒ, ဆေးဝါးဗေဒနှင့် function ကို. ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol ။ သိပ္ပံ. 13, 177-184 ။ [PubMed]
Koob gf (1999) ။ စိတ်ဖိစီးမှု, corticotropin-releasing အချက်နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ. အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ. 897, 27-45 ။ Doi: 10.1111 / j.1749-6632.1999.tb07876.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf (2003) ။ စွဲလမ်း၏ Neuroadaptive ယန္တရားများ: အတိုးချဲ့ amygdala အပေါ်လေ့လာမှုများ. အီးယူအာရ်။ Neuropsychopharmacol. 13, 442-452 ။ Doi: 10.1016 / j.euroneuro.2003.08.005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf (2009a) ။ စွဲလမ်းအတွက်အာရုံခံဆားကစ်၏ Dynamics ကို: ဆုလာဘ်, antireward နှင့်စိတ်ခံစားမှုမှတ်ဉာဏ်. Pharmacopsychiatry 42 (ပျော့ပျောင်း။ 1), S32-S41 ။ Doi: 10.1055 / s ကို-0029-1216356 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf (2009b) ။ စွဲလမ်းအတွက် compulsive ၏အမှောင်ဘက်ခြမ်းဘို့ Neurobiological အလွှာ. Neuropharmacology 56 (ပျော့ပျောင်း။ 1), 18-31 ။ Doi: 10.1016 / j.neuropharm.2008.07.043 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob GF, Ahmed SH, Boutrel B. , Chen SA, Kenny PJ, Markou အေ, O'Dell LE, Parsons LH, Sanna PP (2004) ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက် Neurobiological ယန္တရားများ. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 27, 739-749 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2003.11.007 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Bloom FE (1985) ။ Corticotropin-releasing အချက်နှင့်အပြုအမူ. ဗဟိုဘဏ်။ proc. 44 (1 Pt 2), 259-263 ။ [PubMed]
Koob gf, Heinrich SC (1999) ။ ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအတွက်ဖြန့်ချိအချက်နှင့် urocortin corticotropin တစ်အခန်းကဏ္ဍ. ဦးနှောက် Res. 848, 141–152. doi: 10.1016/S0006-8993(99)01991-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Le Moal အမ် (1997) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: hedonic homeostatic dysregulation. သိပ္ပံ 278, 52-58 ။ Doi: 10.1126 / science.278.5335.52 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Le Moal အမ် (2001) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ, ဆုလာဘ်၏ dysregulation နှင့် allostasis. Neuropsychopharmacology 24, 97–129. doi: 10.1016/S0893-133X(00)00195-0. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Le Moal အမ် (2008a) ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်က. Annu ။ ဗျာ Psychol. 59, 29-53 ။ Doi: 10.1146 / annurev.psych.59.103006.093548 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Le Moal အမ် (2008b) ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းအတွက်ပြိုင်ဘက်စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များအဘို့အ Neurobiological ယန္တရားများ. ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ. 363, 3113-3123 ။ Doi: 10.1098 / rstb.2008.0094 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Nestler EJ (1997) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏ neurobiology. ဂျေ Neuropsychiatry Clin ။ neuroscience. 9, 482-497 ။ [PubMed]
Koob gf, Zorrilla EP (2010) ။ စွဲလမ်း၏ Neurobiological ယန္တရားများ: corticotropin-releasing အချက်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်. Curr ။ Opin ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ မူးယစ်ဆေးဝါး 11, 63-71 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Koob gf, Zorrilla EP (2012) ။ တစ်ဦး revisionist အမြင်: စိတ်ရောဂါမမှန်များအတွက် corticotropin-releasing အချက် pharmacotherapy အပေါ် Update ကို. Neuropsychopharmacology 37, 308-309 ။ Doi: 10.1038 / npp.2011.213 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Korotkova TM, Brown က RE, Sergeeva oa, Ponomarenko AA ကို, Haas HL (2006) ။ ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာ၌ arousal- နှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေး-related dopaminergic အပေါ် neuropeptides နှင့် GABAergic အာရုံခံ၏ဆိုးကျိုးများ. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 23, 2677-2685 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2006.04792.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kostich WA, Chen ကအေ, Sperle K. , Largent BL (1998) ။ အဆိုပါ CRF2gamma အဲဒီ receptor: တစ်ဝတ္ထုလူ့ corticotropin-releasing အချက် (CRF) အဲဒီ receptor ၏မော်လီကျူးဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. Mol ။ Endocrinol. 12, 1077-1085 ။ Doi: 10.1210 / me.12.8.1077 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kreibich AS, Briand L. , Cleck ဖြစ်မှု, Ecke L. , ဆန် KC, Blendy ဂျေအေ (2009) ။ ကိုကင်းဆုလာဘ်၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အလားအလာ: CRF R1 နှင့် CREB များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ. Neuropsychopharmacology 34, 2609-2617 ။ Doi: 10.1038 / npp.2009.91 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မရှိခြင်း AK, Floyd DW, McCool BA (2005) ။ နာတာရှည်အီသနောကိုစားသုံးမိကြွက်အလယ်ပိုင်း amygdala အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို proanxiety အချက်များ modulates. အရက် 36, 83-90 ။ Doi: 10.1016 / j.alcohol.2005.07.004 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
le အေဒီမာအက်စ်, Juzytsch ဒဗလျူ, ဖလက်ချာ PJ, Shaham Y. (2002) ။ အရက်မှ relapse အတွက်ပျမ်းမျှ raphe နျူကလိယအတွက် corticotropin-releasing အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ. ဂျေ neuroscience. 22, 7844-7849 ။ [PubMed]
le အေဒီမာအက်စ်, Juzytsch ဒဗလျူ, Watchus ဂျေ, Shalev U. , Shaham Y. (2000) ။ ကြွက်များတွင်အရက်-ရှာကြံအပြုအမူမှစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အတွက် corticotrophin-releasing အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ. Psychopharmacology (Berl ။ ) 150, 317-324 ။ Doi: 10.1007 / s002130000411 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
le အေဒီ, Quan ခ, Juzytch ဒဗလျူ, ဖလက်ချာ PJ, Joharchi N. , Shaham Y. (1998) ။ ကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုမှအရက်နှင့်ထိတွေ့မှု၏ထိုး priming အားဖြင့်အရက်-ရှာ၏ Reinstatement. Psychopharmacology (Berl ။ ) 135, 169-174 ။ Doi: 10.1007 / s002130050498 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
LeDoux ဂျေ (2003) ။ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်ကြောက်ရွံ့လျက်, amygdala. cell ။ Mol ။ Neurobiol. 23, 727-738 ။ Doi: 10.1023 / A: 1025048802629 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
LeDoux je (1992) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှု၏ဦးနှောက်ယန္တရားများ. Curr ။ Opin ။ Neurobiol. 2, 191–197. doi: 10.1016/0959-4388(92)90011-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
LeDoux je (1993) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှုမှတ်ဥာဏ်စနစ်တွေ. ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res. 58, 69-79 ။ [PubMed]
LeDoux je (2000) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှုဆားကစ်. Annu ။ ဗျာ neuroscience. 23, 155-184 ။ Doi: 10.1146 / annurev.neuro.23.1.155 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lewis က K. လီ C. , Perrin MH, Blount အေ, Kunitake K. , Donaldson C. , Vaughan ဂျေ, Reyes TM, Gulyas ဂျေ, Fischer ဒဗလျူ, Bilezikjian L. , Rivier ဂျေ, Sawchenko PE, ခြိုငျ့ WW (2001) ။ urocortin III ၏ identification, အ corticotropin-releasing အချက်တစ်ခုအပိုဆောင်းဦး CRF2 အဲဒီ receptor အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့နှင့်အတူ (CRF) မိသားစု. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 98, 7570-7575 ။ Doi: 10.1073 / pnas.121165198 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Li ကစီ, ချန်ပီ, Vaughan ဂျေ, Lee က KF, ခြိုငျ့ဒဗလျူ (2007) ။ Urocortin3ဂလူးကို့စ-နှိုးဆွအင်ဆူလင်လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်စွမ်းအင် homeostasis ထိန်းညှိ. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 104, 4206-4211 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0611641104 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လျူဂျေ, ယုခ, Neugebauer V. , Grigoriadis DE, Rivier ဂျေ, ခြိုငျ့ WW, Shinnick-Gallagher P. , Gallagher JP (2004) ။ Corticotropin-releasing အချက်နှင့် Urocortin ငါ excitatory glutamatergic Synaptic ဂီယာ modulate. ဂျေ neuroscience. 24, 4020-4029 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5531-03.2004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လျူ X တို့မှာ, Weiss အက်ဖ် (2002) ။ အီသနောရှာ၏ reinstatement အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုအပိုဆောင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု: corticotropin-releasing အချက်၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ activation ၏မှီခိုနှင့်အခန်းကဏ္ဍ၏သမိုင်းအားဖြင့် exacerbation နှင့် opioid ယန္တရားများ. ဂျေ neuroscience. 22, 7856-7861 ။ [PubMed]
Logrip ML, Koob gf, Zorrilla EP (2011) ။ pharmacological ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်အလားအလာ: မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် corticotropin-releasing အချက်၏အခန်းက္ပ. CNS မူးယစ်ဆေးဝါး 25, 271-287 ။ Doi: 10.2165 / 11587790-000000000-00000 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lovenberg TW, Chalmers ၎င်းကို, လျူ C. , De Souza eb (1995a) ။ CRF2 alpha နှင့် CRF2 beta ကိုအဲဒီ receptor mRNAs differential ကြွက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်နှင့်အရံတစ်ရှူးအကြားဖြန့်ဝေနေကြသည်. ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 136, 4139-4142 ။ Doi: 10.1210 / en.136.9.4139 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lovenberg TW, Liaw CW, Grigoriadis DE, Clevenger ဒဗလျူ, Chalmers ၎င်းကို, De Souza eb, Oltersdorf တီ (1995b) ။ ကြွက်ဦးနှောက်ကနေ Function ကွဲပြား corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor မျိုးကွဲများ၏ကိုယ်ပွားနှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 92, 836-840 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lowery-Gionta ဥပမာ Navarro အမ်လီ C. , Pleil Ke, Rinker ဂျာကော့ BR, Sprow GM က, Kash TL, သီရဲလ် TE (2012) ။ ဗဟို amygdala အတွက်အချက်ပြ Corticotropin လွှတ်အချက် C57BL / 6J ကြွက်တွေမှာမူးရူးကဲ့သို့အီသနောစားသုံးမှုစဉ်အတွင်းစုဆောင်းနေသည်. ဂျေ neuroscience. 32, 3405-3413 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.6256-11.2012 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
lu L. , Shepard JD, ခန်းမ FS, Shaham Y. (2003) ။ ကြွက်များတွင် opiate နှင့် psychostimulant အားဖြည့်, reinstatement နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်. neuroscience ။ Biobehav ။ ဗြာ. 27, 457–491. doi: 10.1016/S0149-7634(03)00073-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Luscher C. , Malenka RC (2011) ။ စွဲလမ်းထဲမှာမူးယစ်ဆေး-evoked Synaptic plasticity: မော်လီကျူးအပြောင်းအလဲများကနေပတ်လမ်းအသစ်ပြန်ပြုပြင်မှ. အာရုံခံဆဲလျ 69, 650-663 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2011.01.017 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Maren အက်စ် (1999) ။ အဆိုပါ amygdala အတွက်ရေရှည်အလားအလာ: စိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တစ်ယန္တရား. ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience. 22, 561–567. doi: 10.1016/S0166-2236(99)01465-43. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Marinelli PW, Funk ဃ, Juzytsch ဒဗလျူ, Hard အက်စ်, ဆန် KC, Shaham Y. , Le အေဒီ (2007) ။ အဆိုပါ CRF1 အဲဒီ receptor ရန် antalarmin အော်ပရေတာအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံအရက်၏ reinstatement အတွက် yohimbine-သွေးဆောင်တိုး attenuates. Psychopharmacology (Berl ။ ) 195, 345-355 ။ Doi: 10.1007 / s00213-007-0905-x ကို။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မာတင်တီဂျေ, Coller အမ်, Co. , C တို့, စမစ် je (2008) ။ အဆိုပါ ventral pallidum နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌, ဒါပေမယ့်မနျူကလိယ accumbens အတွက် micro-opioid အဲဒီ receptor alkylation, ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ဘိန်းဖြူ၏သက်ရောက်မှု attenuates. Neuropsychopharmacology 33, 1171-1178 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301490 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မက်ဒေါ်နယ် AJ (1998) ။ အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ amygdala မှ cortical လမ်းကြောင်း. prog ။ Neurobiol. 55, 257–332. doi: 10.1016/S0301-0082(98)00003-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Meloni ဥပမာ Jackson က AV စနစ်, Cohen ကို BM, Carlezon WA, ဂျူနီယာ (2005) ။ ပရိုတိန်း immunoblot ဖြင့်တိုင်းတာကြွက်ဦးနှောက်ထဲကနေ Corticotropin-releasing အချက်. Peptides 26, 2252-2256 ။ Doi: 10.1016 / j.peptides.2005.04.011 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Merali Z. , McIntosh ဂျေ, Kent P. , Michaud ဃ, Anisman အိပ်ချ် (1998) ။ ဆန္ဒရှိခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်ဖြစ်ရပ်များအတွက် amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယမှာ corticotropin-releasing ဟော်မုန်းနှင့် bombesin ကဲ့သို့ peptides များလွှတ်ပေးရန်ကျလာသော. ဂျေ neuroscience. 18, 4758-4766 ။ [PubMed]
Merlo Pich အီး, Lorang အမ်, Yeganeh အမ်, Rodriguez က de Fonseca အက်ဖ်, Raber ဂျေ, Koob gf, Weiss အက်ဖ် (1995) ။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အီသနောဆုတ်ခွာစဉ်ကနိုးကြွက်များ၏ amygdala အတွက် extracellular corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity အဆင့်ဆင့်၏တိုး microdialysis ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်. ဂျေ neuroscience. 15, 5439-5447 ။ [PubMed]
Molander အေ, Vengeliene V. , Heilig အမ်, Wurst ဒဗလျူ, Deussing JM, Spanagel R. (2012) ။ အဆိုပါ Crhr1 ဗီဇ၏ဦးနှောက်-တိကျတဲ့ inactivation Post-မှီခိုခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အရက်စားသုံးမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, ဒါပေမယ့် relapse ကဲ့သို့သောက်သုံးရေမထိခိုက်ပါဘူး. Neuropsychopharmacology 37, 1047-1056 ။ Doi: 10.1038 / npp.2011.297 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Muller ကို MB, Zimmermann အက်စ်, Sillaber ဗြဲ, Hagemeyer TP, Deussing JM, Timpl P. , Kormann က MS, Droste SK ကို, Kuhn R. , Reul JM, Holsboer အက်ဖ်, Wurst ဒဗလျူ (2003) ။ Limbic corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor 1 စိတ်ဖိစီးမှုမှစိုးရိမ်ပူပန်မှု-related အပြုအမူများနှင့်ဟော်မုန်းလိုက်လျောညီထွေ mediates. နတ်။ neuroscience. 6, 1100-1107 ။ Doi: 10.1038 / nn1123 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nie Z. , Schweitzer P. , Roberts သည် AJ, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Moore က SD, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း (2004) ။ အီသနော CRF1 receptors ကနေတဆင့်ဗဟို amygdala အတွက် GABAergic ဂီယာကိုကြီးထွားများပြားစေ. သိပ္ပံ 303, 1512-1514 ။ Doi: 10.1126 / science.1092550 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nielsen CK, Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ Bito-Onon JJ လီ R. , Ananthan အက်စ်, Bartlett SE (2011) ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် opioid အဲဒီ receptor ရန်, SoRI-9409, အီသနော-ရှာ၏ yohimbine စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement လျော့ကျ. စှဲလမျးသူ။ Biol. 17, 224-234 ။ Doi: 10.1111 / j.1369-1600.2010.00295.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nielsen သည် SM, Nielsen LZ, Hjorth လုပ် SA, Perrin MH, ခြိုငျ့ WW (2000) ။ tethering-peptide / corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor Chimera ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို Activation. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 97, 10277-10281 ။ Doi: 10.1073 / pnas.97.18.10277 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Overstreet DH, Knapp DJ သမား, Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း (2004) ။ CRF နှင့် CRF1 receptors ခြင်းဖြင့်မျိုးစုံအီသနောဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူ၏ Modulation. Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ. 77, 405-413 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2003.11.010 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Palkovits အမ်, Brownstein MJ, ခြိုငျ့ဒဗလျူ (1983) ။ Corticotropin သိုးဦးနှောက်၏ hypothalamic နှင့် extrahypothalamic အရေးပါအတွက်အချက် (CRF) immunoreactivity လွှတ်. Neuroendocrinology 37, 302-305 ။ [PubMed]
ဃ, Quirk GJ, Ledoux je (2004) Pare ။ conditional ကြောက်ရွံ့ခြင်း၌ amygdala ကွန်ရက်များပေါ်တွင်နယူး Vista. ဂျေ Neurophysiol. 92, 1-9 ။ Doi: 10.1152 / jn.00153.2004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Perrin အမ်, Donaldson C. , ချန် R. , Blount အေ, Berggren တီ, Bilezikjian L. , Sawchenko P. , ခြိုငျ့ဒဗလျူ (1995) ။ နှလုံးထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတစ် cDNA တစ်စက္ကန့် corticotropin-releasing အချက် receptor မျိုးရိုးဗီဇနှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ၏ identification. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 92, 2969-2973 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Phelps ကို EA, LeDoux je (2005) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ဖို့ amygdala ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်လူ့အပြုအမူမှ. အာရုံခံဆဲလျ 48, 175-187 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2005.09.025 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Piazza PV, Deminiere JM, Le Moal အမ်ရှိမုန်အိပ်ချ် (1990) ။ Stress- နှင့် pharmacologically-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းစိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူမှအားနည်းချက်တိုးပွါး. ဦးနှောက် Res. 514, 22–26. doi: 10.1016/0006-8993(90)90431-A. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pitkanen အေ, Jolkkonen အီး, Kemppainen အက်စ် (2000) ။ ကြွက် amygdaloid ရှုပ်ထွေးသော၏ခန္ဓာဗေဒသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော. Folia ။ Morphol ။ (Warsz ။ ) 59, 1-23 ။ [PubMed]
Pitt မဂ္ဂါဝပ်, Todorovic C. , Blank ကတီ, Takahashi LK (2009) ။ အဆိုပါ amygdala နှင့် corticotropin-releasing အချက်များ၏အလယ်ပိုင်းနျူကလိယ: Contextual ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မှတ်ဉာဏ်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို. ဂျေ neuroscience. 29, 7379-7388 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0740-09.2009 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pollandt အက်စ်, လျူဂျေ, Orozco-Cabal L. , Grigoriadis DE, ခြိုငျ့ WW, Gallagher JP, Shinnick-Gallagher P. (2006) ။ ကိုကင်းဆုတ်ခွာ CRF, NMDA receptors နှင့် PKA ကနေတဆင့်ဗဟို amygdala glutamatergic synapses မှာ corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့်သွေးဆောင်ရေရှည်အလားအလာပိုကောင်းစေပါတယ်. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 24, 1733-1743 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2006.05049.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အိုးထိန်းသမားအီး, Behan DP, Linton EA ၏, လောရီ PJ, Sawchenko PE, ခြိုငျ့ WW (1992) ။ ပရိုတိန်း -binding တစ် corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏ဗဟိုဖြန့်ဖြူး CRF နှင့်အတူအပြန်အလှန်၏မျိုးစုံက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် Modes သာခန့်မှန်း. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 89, 4192-4196 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အိုးထိန်းသမားအီး, Sutton အက်စ်, Donaldson C. , ချန် R. , Perrin အမ်, Lewis ကကေ, Sawchenko PE, ခြိုငျ့ဒဗလျူ (1994) ။ ကြွက်ဦးနှောက်နှင့် pituitary အတွက် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor mRNA ထုတ်ဖော်ဖြန့်ဖြူး. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 91, 8777-8781 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Refojo ဃ, Schweizer အမ်, Kuehne C. , Ehrenberg အက်စ်, Thoeringer C. , Vogl လေး, ဆက်ကပ်အပ်နှံထား N. , Schumacher အမ်, ဗွန် Wolff G. အ, Avrabos C. , Touma C. , Engblom ဃ, Schutz, G ။ , Nave ka, ဧဒါအမ်, Wotjak မှန် CT, Sillaber ဗြဲ, Holsboer အက်ဖ်, Wurst ဒဗလျူ, Deussing JM (2011) ။ Glutamatergic နှင့် dopaminergic အာရုံခံ CRHR1 ၏ anxiogenic နှင့် anxiolytic သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေ. သိပ္ပံ 333, 1903-1907 ။ Doi: 10.1126 / science.1202107 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Reyes TM, Lewis ကကေ, Perrin MH, Kunitake KS, Vaughan ဂျေ, Aria, CA, Hogenesch JB, Gulyas ဂျေ, Rivier ဂျေ, ခြိုငျ့ WW, Sawchenko PE (2001) ။ Urocortin II ကို: ရွေးချယ်အမျိုးအစား2CRF receptors အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်သော corticotropin-releasing အချက် (CRF) neuropeptide မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 98, 2843-2848 ။ Doi: 10.1073 / pnas.051626398 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rezayof အေ, Zarrindast MR, Sahraei အိပ်ချ်, Haeri-Rohani AH (2002) ။ ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကို၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စကားရပ်အပေါ်ဗဟို amygdala ၏ dopamine D2 receptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု. Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ. 74, 187–197. doi: 10.1016/S0091-3057(02)00989-9. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Richards JK, Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ Steensland P. , Taha လုပ် SA, Borgland SL, Bonci အေ, Bartlett SE (2008) ။ orexin-1 / hypocretin-1 receptors ၏တားစီး Long-အီဗန်ကြွက်များတွင်ရှာကြံအီသနောနှင့် sucrose ၏ yohimbine-သွေးဆောင် reinstatement ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်. Psychopharmacology (Berl ။ ) 199, 109–117. doi: 10.1007/s00213-008-1136-5. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရစ်ချတာ RM, Pich EM, Koob gf, Weiss အက်ဖ် (1995) ။ ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြွက် amygdala ကနေ corticotropin-releasing အချက်၏ extracellular အဆင့်ဆင့်အတွက်ကင်း-နှိုးဆွတိုး၏အသိမြှ intracranial microdialysis ကဆုံးဖြတ်အဖြစ်. neuroscience ။ လက်တ. 187, 169–172. doi: 10.1016/0304-3940(95)11365-4. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရစ်ချတာ RM, Weiss အက်ဖ် (1999) ။ Vivo အတွက် ကြွက် amygdala အတွက် CRF လွှတ်ပေးရန် Self-စီမံခန့်ခွဲကြွက်များတွင်ကင်းဆုတ်ခွာစဉ်ကတိုးပွါး. synapses 32, 254–261. doi: 10.1002/(SICI)1098-2396(19990615)32:4<254::AID-SYN2>3.0.CO;2-H. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rijkers ၎င်းကို, Kruijtzer ဂျာဗန် Oostenbrugge အမ်, Ronken အီး, တွင်း Hartog ဂျာ Liskamp RM (2004) ။ ရန်လှုပ်ရှားမှုအတွက်လိုအပ်သောတစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာ sequence ကိုမှဦးဆောင်အချက်ရန် astressin လွှတ်သည့် corticotropin အပေါ်ဖွဲ့စည်းပုံ-လှုပ်ရှားမှုလေ့လာမှုများ,. Chembiochem 5, 340-348 ။ Doi: 10.1002 / cbic.200300769 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rivier ဂျေ, Rivier C. , ခြိုငျ့ဒဗလျူ (1984) ။ corticotropin-releasing အချက်၏ဒြပ်ယှဉ်ပြိုင်ရန်: ကြွက်များတွင် ACTH Secret အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု. သိပ္ပံ 224, 889-891 ။ Doi: 10.1126 / science.6326264 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရောဘတ်အမ်, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Moore က SD, Tallent MK, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း (2003) ။ အီသနောကြွက်အလယ်ပိုင်း amygdala အာရုံခံအတွက်အကျူးများနှင့် postsynaptic က်ဘ်ဆိုက်များနှစ်ဦးစလုံးမှာ GABAergic ဂီယာတိုးပွါး. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 100, 2053-2058 ။ Doi: 10.1073 / pnas.0437926100 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရောဘတ်အမ်, Madamba စင်ကာပူဒေါ်လာ, Stouffer DG, Parsons LH, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း (2004) ။ အီသနော-မှီခိုကြွက်များ၏အလယ်ပိုင်း amygdala အတွက်တိုးမြှင့်ဂါဘမြို့သားဖြန့်ချိ. ဂျေ neuroscience. 24, 10159-10166 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3004-04.2004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရောဘတ် AJ, ကိုးလ်အမ်, Koob gf (1996) ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdala muscimol မှီခိုကြွက်များတွင်အော်ပရေတာအီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှုလျော့နည်းစေ. အရက်။ Clin ။ Exp ။ res. 20, 1289-1298 ။ Doi: 10.1111 / j.1530-0277.1996.tb01125.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rodaros ဃ, Caruana DA, Amir အက်စ်, Stewart ကဂျေ (2007) ။ limbic forebrain နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏ဒေသတွင်းဖို့ hypothalamus ၏ paraventricular နျူကလိယကနေ Corticotropin-releasing အချက်စီမံချက်များ. neuroscience 150, 8-13 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2007.09.043 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Roozendaal ခ, Brunson KL, Holloway BL, McGaugh JL, Baram tz (2002) ။ မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးထိန်းညှိအတွက် basolateral amygdala အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-ဖြန့်ချိ corticotropin-releasing hormone တွေပါဝင်ပတ်သက်မှု. proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ. 99, 13908-13913 ။ Doi: 10.1073 / pnas.212504599 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Saffran အမ်, Schally AV စနစ်, Benfey BG (1955) ။ တစ်ဦး neurohypophysial အချက်အားဖြင့် adenohypophysis ထံမှ corticotropin များလွှတ်ပေးရန်၏ stimulation. ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 57, 439-444 ။ Doi: 10.1210 / endo-57-4-439 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sah P. , တေးဂီတဆိုင်ရာပံ့ပိုး ES, လိုပက်ဇ် De Armentia အမ်, ပါဝါဂျေ (2003) ။ အဆိုပါ amygdaloid ရှုပ်ထွေး: ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒ. Physiol ။ ဗြာ. 83, 803-834 ။ Doi: 10.1152 / physrev.00002.2003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sakanaka အမ်, Shibasaki တီ, Lederis K. (1986) ။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကြွက် amygdaloid ရှုပ်ထွေးအတွက် corticotropin-releasing အချက်ကဲ့သို့ immunoreactivity ၏ efferent စီမံချက်များ. ဦးနှောက် Res. 382, 213–238. doi: 10.1016/0006-8993(86)91332-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sanchez MM, Young က LJ, Plotsky pm တွင်, Insel TR (1999) ။ Autoradiographic နှင့် On-site ကို nonhuman မျောက်ဦးနှောက်ထဲမှာ corticotropin-releasing အချက် 1 နှင့်2receptors ၏ Hybrid မူပြောင်းခြင်း. ဂျေ comp ။ Neurol. 408, 365–377. doi: 10.1002/(SICI)1096-9861(19990607)408:3<365::AID-CNE5>3.0.CO;2-N. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sarnyai Z. , Hohn ဂျေ, Szabo G. အ, Penke ခ (1992) ။ ကြွက်များတွင်ကင်း၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေအတွက် endogenous corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ. ဘဝကသိပ္ပံ. 51, 2019-2024 ။ [PubMed]
Sarnyai Z. , Shaham Y. , Heinrich SC (2001) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် corticotropin-releasing အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ. Pharmacol ။ ဗြာ. 53, 209-243 ။ [PubMed]
Seasholtz AF, Valverde RA, Denver RJ (2002) ။ Corticotropin-releasing ဟော်မုန်း-binding ပရိုတိန်း: နို့တိုက်သတ္တဝါများမှငါးကနေဇီဝဓါတုဗေဒနဲ့ function ကို. ဂျေ Endocrinol. 175, 89-97 ။ Doi: 10.1677 / joe.0.1750089 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shaham Y. , Erb အက်စ်, Leung အက်စ်, Buczek Y. , Stewart ကဂျေ (1998) ။ က CP-154 526, အ corticotropin-releasing factor1 အဲဒီ receptor ၏တစ်ဦးရွေးချယ် non-peptide ရန် cocaine- နှင့်ဘိန်းဖြူ-လေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များတွင်ရှာကြံမူးယစ်ရန်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse attenuates. Psychopharmacology (Berl ။ ) 137, 184-190 ။ Doi: 10.1007 / s002130050608 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shaham Y. , Funk ဃ, Erb အက်စ်, Brown ကတီဂျေ, Walker က CD ကို, Stewart ကဂျေ (1997) ။ Corticotropin-releasing အချက်, ဒါပေမယ့် corticosterone, ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူ-ရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်မဟုတ်. ဂျေ neuroscience. 17, 2605-2614 ။ [PubMed]
Shaham Y. , Kelsey je, Stewart ကဂျေ (1995) ။ ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအပေါ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ယာယီအချက်များ. Psychopharmacology (Berl ။ ) 117, 102-109 ။ [PubMed]
Silberman Y. , Bajo အမ်, ချာပယ်လ်လေး, ခရစ်ယာန်၎င်းကို, Cruz အမ်, Diaz MR, Kash တီ, မရှိခြင်း AK, ရှုပ်ထွေး ro, Siggins ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Winder ဃ, ရောဘတ်အမ်, McCool BA, Weiner JL (2009) ။ အရက်-စိတ်ဖိစီးမှု-စိုးရိမ်စိတ် interaction ကမှပံ့ပိုး Neurobiological ယန္တရားများ. အရက် 43, 509-519 ။ Doi: 10.1016 / j.alcohol.2009.01.002 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pins အရေအတွက်အနေနဲ့လည်းဂျာ Haass-Koffler CL, Bito-Onon ဂျေလီ R. , Bartlett SE (2011) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယအတွက် Mifepristone အီသနော-ရှာ၏ yohimbine စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement လျော့ကျစေပါတယ်. Neuropsychopharmacology 37, 906-918 ။ Doi: 10.1038 / npp.2011.268 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Smith က GW, Aubry JM, Dellu အက်ဖ်, Contarino အေ, Bilezikjian LM, ရွှေ LH, ချန် R. , Marchuk Y. , Hauser C. , Bentley, CA, Sawchenko PE, Koob gf, ခြိုငျ့ဒဗလျူ, Lee က KF (1998) ။ အချက်အဲဒီ receptor 1-လစ်လပ်ကြွက် display ကိုလွှတ် Corticotropin စိုးရိမ်စိတ်, ချို့ယွင်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ထစ်အငေါ့ neuroendocrine ဖှံ့ဖွိုးတိုးတလျော့နည်းသွား. အာရုံခံဆဲလျ 20, 1093–1102. doi: 10.1016/S0896-6273(00)80491-2. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sommer WH, Rimondini R. , Hansson AC အ, Hipskind PA ဆိုပြီး, Gehlert DR, ဘား CS, Heilig MA (2008) ။ မှီခိုနေတဲ့သမိုင်းကိုအောက်ပါမိမိဆန္ဒအလျောက်အရက်စားသုံးမှု၏ Upregulation, စိတ်ဖိစီးမှုမှအမူအကျင့် sensitivity ကိုနှင့် amygdala crhr1 စကားရပ်. Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 139-145 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2007.01.010 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Suda တီ, ဆူမီတိုမိုတီ, Tozawa အက်ဖ်, Ushiyama တီ, Demura အိပ်ချ် (1989) ။ Corticotropin-releasing အချက်-binding ပရိုတိန်းတစ် glycoprotein ဖြစ်ပါသည်. ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Biophys ။ res ။ ဆက်သွယ်ရေး. 165, 703–707. doi: 10.1016/S0006-291X(89)80023-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sun က N. , Cassell MD (1993) ။ ကြွက်အလယ်ပိုင်းတိုးချဲ့ amygdala အတွက်အခ်ါ GABAergic အာရုံခံ. ဂျေ comp ။ Neurol. 330, 381-404 ။ Doi: 10.1002 / cne.903300308 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Swanson LW, Sawchenko PE, Rivier ဂျေ, ခြိုငျ့ WW (1983) ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ ovine corticotropin-releasing အချက် immunoreactive ဆဲလ်များနှင့်အမျှင်အဖွဲ့: တစ်ခု immunohistochemical လေ့လာမှု. Neuroendocrinology 36, 165-186 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2007.09.043 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tagliaferro P. , Morales အမ် (2008) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ၌ corticotropin-releasing အချက်ပါဝင်သော axon ဆိပ်ကမ်းနှင့် dopaminergic အာရုံခံအကြား synapses အများစု glutamatergic များမှာ. ဂျေ comp ။ Neurol. 506, 616-626 ။ Doi: 10.1002 / cne.21576 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Thatcher-Britton K. , Koob gf (1986) ။ အရက် corticotropin-releasing အချက်များ၏ proconflict အကျိုးသက်ရောက်မှုနောက်ကြောင်းပြန်. စည်းမျဉ်းများ။ Pept. 16, 315-320 ။ [PubMed]
Timpl P. , Spanagel R. , Sillaber ဗြဲ, Kresse အေ, Reul JM, Stalla GK, Blanquet V. , Steckler တီ, Holsboer အက်ဖ်, Wurst ဒဗလျူ (1998) ။ ချို့ယွင်းစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်တစ်ဦး functional corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor ချို့တဲ့ကြွက်များတွင်လျှော့ချစိုးရိမ်စိတ် 1. နတ်။ မျိုးရိုးဗီဇ. 19, 162-166 ။ Doi: 10.1038 / 520 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tomkins DM, ရောင်းအား EM (2001) ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: မူးယစ်ဆေးမှီခိုများ၏အကြောင်းရင်းနှင့်ကုသမှုအတွက် neurotransmitters ၏အခန်းကဏ္ဍကို. CMAJ 164, 817-821 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tronche အက်ဖ်, Kellendonk C. , Kretz O. , ဓာတ်ငွေ့ P. , Anlag K. , Orban ကို PC, Bock R. , Klein R. , Schutz G. အ (1999) ။ လျှော့ချစိုးရိမ်စိတ်အတွက်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ရလဒ်များကိုအတွက် glucocorticoid receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏နှောင့်အယှက်. နတ်။ မျိုးရိုးဗီဇ. 23, 99-103 ။ Doi: 10.1038 / 12703 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tsai-မောရစ် CH, Buczko အီး, Geng Y. , Gamboa-Pinto အေ, Dufau ML (1996) ။ အချက်အဲဒီ receptor လွှတ်ကြွက် corticotropin ၏ Genomics ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ အတန်း II ကို, G ပရိုတိန်း-coupled receptors အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး. ဂျေ Biol ။ Chem. 271, 14519-14525 ။ Doi: 10.1074 / jbc.271.24.14519 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Turnbull AV စနစ်, Rivier C. (1997) ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှ Corticotropin-releasing အချက် (CRF) နှင့် endocrine တုံ့ပြန်မှု: CRF receptors, binding ပရိုတိန်းနှင့်ဆက်စပ် peptides. proc ။ Soc ။ Exp ။ Biol ။ Med. 215, 1-10 ။ [PubMed]
Tye KM, Stuber GD, က de Ridder ခ, Bonci အေ, Janak PH သည် (2008) ။ thalamo-amygdala synapses ၏လျင်မြန်သောအားကောင်း cue-ဆုလာဘ်သင်ယူမှု mediates. သဘာဝ 453, 1253-1257 ။ Doi: 10.1038 / nature06963 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ungless MA, Singh က V. , Crowder TL, Yaka R. , Ron ဃ, Bonci အေ (2003) ။ Corticotropin-releasing အချက် dopamine အာရုံခံအတွက် CRF အဲဒီ receptor2မှတဆင့် NMDA receptors potentiate မှ CRF binding ပရိုတိန်းလိုအပ်ပါတယ်. အာရုံခံဆဲလျ 39, 401–407. doi: 10.1016/S0896-6273(03)00461-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ungless MA, Whistler JL, Malenka RC, Bonci အေ (2001) ။ လူပျိုကင်းထိတွေ့မှု Vivo အတွက် dopamine အာရုံခံအတွက်ရေရှည်အလားအလာ induces. သဘာဝ 411, 583-587 ။ Doi: 10.1038 / 35079077 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Zorrilla EP, Rivier ဂျေ, ခြိုငျ့ WW, Koob gf (2003) ။ urocortin3တစ်အလွန်အမင်းရွေးချယ်အမျိုးအစား2corticotropin-releasing အချက် agonist ၏ Locomotor ဖိနှိပ်နှင့် anxiolytic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ. ဦးနှောက် Res. 980, 206–212. doi: 10.1016/S0006-8993(03)02971-8. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ခြိုငျ့ဒဗလျူ, Spiess ဂျေ, Rivier C. , Rivier ဂျေ (1981) ။ corticotropin နှင့် beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ 41-ကျန်ကြွင်း ovine hypothalamic peptide ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ. သိပ္ပံ 213, 1394-1397 ။ Doi: 10.1126 / science.6267699 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် Pett K. , Viau V. , Bittencourt JC, ချမ်း RK လီ hy, Aria C. , Prins GS, Perrin အမ်, ခြိုငျ့ဒဗလျူ, Sawchenko PE (2000) ။ ကြွက်နှင့်ကြွက်များ၏ဦးနှောက်နှင့် pituitary အတွက် CRF receptors ကုဒ်သွင်း mRNAs ၏ဖြန့်ဝေ. ဂျေ comp ။ Neurol. 428, 191–212. doi: 10.1002/1096-9861(20001211)428:2<191::AID-CNE1>3.0.CO;2-U. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Vaughan ဂျေ, Donaldson C. , Bittencourt ဂျေ, Perrin MH, Lewis ကကေ, Sutton အက်စ်, ချမ်း R. , Turnbull AV စနစ်, Lovejoy ဃ, Rivier C. , Rivier ဂျေ, Sawchenko PE, ခြိုငျ့ဒဗလျူ (1995 ) ။ Urocortin ငါ urotensin နှင့် corticotropin-releasing အချက်မှငါးမျှားနှင့်ဆက်စပ်သောတစ်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ neuropeptide. သဘာဝ 378, 287-292 ။ Doi: 10.1038 / 378287a0 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Veinante P. , Stoeckel ME, Freund-Mercier MJ (1997) ။ GABA- နှင့် peptide-immunoreactivities ကြွက်အလယ်ပိုင်းတိုးချဲ့ amygdala အတွက် Co-သတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်. Neuroreport 8, 2985-2989 ။ [PubMed]
Vita N. , Laurent P. , Lefort အက်စ်, Chalon P. , Lelias JM, Kaghad အမ်, Le သားမွေး G. အ, Caput ဃ, Ferrara P. (1993) ။ မူလတန်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မောက်စ် pituitary နှင့်ဖြန့်ချိအချက် receptors corticotrophin လူ့ဦးနှောက်၏အလုပ်လုပ်စကားရပ်. FEBS လက်တ. 335, 1–5. doi: 10.1016/0014-5793(93)80427-V. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Walker က DL, Davis ကအမ် (2008) ။ ဒေါက်တာ Lennart Heimer တစ်အခွန်ဆက်: စဉ်ဆက်မပြတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်နှိုင်းယှဉ် Short-ကြာချိန်အတွက်တိုးချဲ့ amygdala ၏အခန်းက္ပ. ဦးနှောက် Struct ။ Funct. 213, 29–42. doi: 10.1007/s00429-008-0183-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wallace ဘီစီ (1989) ။ အက်ကွဲကင်းဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် relapse ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆုံးအဖွတျ. ဂျေ Subst ။ အလွဲသုံးစားမှုရယူထားသော. 6, 95-106 ။ [PubMed]
Wanat MJ, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Stuber GD, Phillips က PE, Bonci အေ (2008) ။ Corticotropin-releasing အချက် ih ၏ပရိုတိန်း kinase ကို C-မှီခိုတိုးမြှင့်မှတဆင့်ပစ်ခတ် mouse ကို ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံဆဲလျတိုးပွါး. ဂျေ Physiol. 586, 2157-2170 ။ Doi: 10.1113 / jphysiol.2007.150078 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ်ခ, သင် ZB, ဆန် KC, ပညာရှိ RA (2007a) ။ ကိုကင်းရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse: ကြွက်များ၏ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းရှိ CRF (2) အဲဒီ receptor နှင့် CRF-binding ပရိုတိန်းများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ. Psychopharmacology (Berl ။ ) 193, 283–294. doi: 10.1007/s00213-007-0782-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ်အိပ်ချ်, Aodon ဂရမ် Shu Y. , Momotani Y. , ဝမ် X တို့မှာ, Mori Y. , Momotani အီး (2007b) ။ စမ်းသပ်ခြင်းကူးစက်တိရစ္ဆာန်များအနေဖြင့်အရံသွေးဆဲလ်ထဲမှာ Corticotropin-releasing ဟော်မုန်းနှင့် urocortin စကားရပ် Mycobacterium avium subsp ။ paratuberculosis. ရောဂါပိုးမွှားများကူးစက်. 9, 1061-1069 ။ Doi: 10.1016 / j.micinf.2007.04.017 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် HL, Morales အမ် (2008 ။ ) အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်း Corticotropin-releasing အချက် binding ပရိုတိန်း dopaminergic အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်. ဂျေ comp ။ Neurol. 509, 302-318 ။ Doi: 10.1002 / cne.21751 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ်ဂျေ, ဖန်ဆိုးကျိုး, လျူ Z. , Lu ကအယ်လ် (2006) ။ footshock-stress- သို့မဟုတ်ကြွက်များတွင်မော်ဖင်းအကိုက် conditional ရာအရပျ preference ကို၏မူးယစ် priming-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ်ဦးနှောက် corticotropin-releasing အချက်အဲဒီ receptor အမျိုးအစား 1 ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ဒေသကြီး-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ. Psychopharmacology (Berl ။ ) 185, 19–28. doi: 10.1007/s00213-005-0262-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Washburn က MS, မော HC (1992) ။ ကြွက် basolateral amygdaloid အာရုံခံ၏ Electrophysiological နှင့် morphological ဂုဏ်သတ္တိများ စသည်တို့အတွက်. ဂျေ neuroscience. 12, 4066-4079 ။ [PubMed]
Watkins အက်စ်အက်စ်, Epping-ဂျော်ဒန်လွှတ်တော်အမတ်, Koob gf, Markou အေ (1999) ။ ကြွက်များတွင်နီကိုတင်းရန်နှင့်အတူနီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့ထားခြင်း. Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူ. 62, 743–751. doi: 10.1016/S0091-3057(98)00226-3. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Weiss အက်ဖ်, Koob gf (2001) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်စနစ်များအလုပ်လုပ်တဲ့ neurotoxicity. Neurotox ။ res. 3, 145-156 ။ [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (1978) ။ ဆုလာဘ်၏ catecholamines သီအိုရီ: တစ်ဝေဖန်သုံးသပ်မှု. ဦးနှောက် Res. 152, 215–247. doi: 10.1016/0006-8993(78)90253-6. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (1998) ။ ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏မူးယစ်ဆေး-activation. မူးယစ်ဆေးအရက်ပြုမှ. 51, 13–22. doi: 10.1016/S0376-8716(98)00063-5. [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (2005) ။ ဆုလာဘ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ Forebrain အလွှာ. ဂျေ comp ။ Neurol. 493, 115-121 ။ Doi: 10.1002 / cne.20689 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (2008) ။ Dopamine နှင့်ဆုလာဘ်: 30 နှစ်ပေါင်းအပေါ် anhedonia ယူဆချက်. Neurotox ။ res. 14, 169-183 ။ Doi: 10.1007 / BF03033808 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝုဒ် RJ, Kemp CF, ဒါဝိဒ်သည်ဂျေ, လောရီ PJ (1997) ။ လူ့ corticotropin-releasing အချက်-binding ပရိုတိန်း၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော. ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab. 82, 1566-1571 ။ Doi: 10.1210 / jc.82.5.1566 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝုဒ် RJ, Kemp CF, ဒါဝိဒ်သည်ဂျေ, Sumner IG, လောရီ PJ (1999) ။ ပရိုတိန်း -binding recombinant လူ့ corticotropin-releasing အချက် (CRF) ၏ Cleavage CRF binding နိုင်စွမ်းတဲ့ 27-kilodalton အပိုင်းအစထုတ်လုပ်. ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab. 84, 2788-2794 ။ Doi: 10.1210 / jc.84.8.2788 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wright SP, Doughty RN, Frampton CM, Gamble GD, Yandle TG, Richards လေး (2009) ။ လူ့နှလုံးပျက်ကွက်အတွက် plasma urocortin 1. Circ ။ နှလုံးကျရှုံးခြင်း. 2, 465-471 ။ Doi: 10.1161 / CIRCHEARTFAILURE.108.840207 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Xue Y. , Steketee JD, Sun ကဒဗလျူ (2012) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ဗဟိုနျူကလိယ၏ Inactivation ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်ပြစ်ဒဏ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေ. အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience. 35, 775-783 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2012.08000.x ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Yamada Y. , Mizutani K. , Mizusawa Y. , Hantani Y. , Tanaka အမ်, Tanaka Y. , Tomimoto အမ်, Sugawara အမ်, Imai N. , Yamada အိပ်ချ်, Okajima N. , Haruta ဂျေ (2004) ။ corticotropin-releasing အချက်၏နယူးလူတန်းစား (CRF) ရန်: အသေးစား peptides CRF အဲဒီ receptor အဘို့အမြင့်မားတဲ့စည်းနှောင်ဆှဖှေဲ့ရှိခြင်း. ဂျေ Med ။ Chem. 47, 1075-1078 ။ Doi: 10.1021 / jm034180 + ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Yokel RA, ပညာရှိ RA (1975 ။ ) ကြွက်များတွင် pimozide ပြီးနောက်စိတ်ကြွဆေးအဘို့အနှိပ်တိုးမြှင့်လီဗာ: ဆုလာဘ်တစ်ခု dopamine သီအိုရီအဘို့အဂယက်ရိုက်. သိပ္ပံ 187, 547-549 ။ Doi: 10.1126 / science.1114313 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zorrilla EP, Koob gf (2012) ။ corticotropin-လွှတ်အချက်-1 ရန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တိုးတက်မှုကို. မူးယစ်ဆေး Discover ။ ယနေ့တွင် 15, 371-383 ။ Doi: 10.1016 / j.drudis.2010.02.011 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zorrilla EP, Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Weiss အက်ဖ် (2001) ။ မှီခိုကြွက်များတွင်အလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာစဉ်ကာလအတွင်းဒေသဆိုင်ရာ CRF ကဲ့သို့-immunoreactivity နှင့် plasma corticosterone ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်အပြောင်းအလဲများ. Psychopharmacology (Berl ။ ) 158, 374-381 ။ Doi: 10.1007 / s002130100773 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]